ကာမအမှောငျ – My Blog
ကမြနာမညျက… ထှေးထှေးခငျ၊ အသကျက ၃၅၊ ကမြမှာအပြိုမဟုပျပါ..ယောကျကြားက အသကျကွီးသညျ၁၅နှဈခနျ့ကှာသညျ။ ကမြယောကျကြားက custom ဦးစီးဆိုတော့ နယျတှငျအနမြေားသညျ။ ကမြ ခန်တာကိုယျအခြိုးအစားမှာ ၃၇ / ၂၅ / ၃၈ ရှိသဖွငျ့ မွငျသူတိုငျးလညျပွနျကွညျ့ရသညျ့ အလှပိုငျရှငျဖွဈသညျ။ ကမြမှာ အိမျတှငျ အမွဲတမျး တဈယောကျတညျးနေ နရေသောကွောငျ့ ပွငျးလာသညျ။ ထို့ကွောငျ့ fb သုံးသညျ။ fb သုံးရငျး ယောကျကြားလေး မိတျဆှတှေမြေားလာသညျ။ သူတိုနဲ့ ပငျြးရငျ cb ကနစေကားပွောဖွဈသညျ။ တဈရကျတှငျ ကမြ အကောငျ့ထဲမှ ကောငျလေးတဈယောကျနဲ့ အပွငျတှငျတှဖေို့ခြိနျးလိုကျသညျ။ ကမြ ရမေိုးခြိုး အလှပွငျပွီး သူခြိနျးသညျ့ Ocean သို့ထှကျလာခဲ့သညျ။
ကောငျလေးကအသကျ၂၅ခနျ့သာရှိသညျ။ အသားညိုညို ကုလားဆငျလေးဖွဈသညျ။ အရပျမွငျ့သညျဗလကောငျးကောငျး နှငျ့ယောကျကြားပီသပုံရသညျ။ မငျးနာမညျက? ဩ ကြှနျတေျာ့နာမညျက Michel ပါခငျဗြ။ မမက အပွငျမှာပိုလှတယျ… (အမလေး ..မွှောကျနပွေနျပွီ..ဘာစားမလညျးပွော ) မမ က မောငျလေးစားခငျြတာကြှေးမှာလား ? (ကြှေးမှာပေါ့ မောငျလေးရဲ့) နောကျမှပွောမယျ..မမ မကြှေးလို့ကတော့.. (အမလေး …ကြှေးပါမယျဆိုမှ …. ကဲ ဒီမှာ အကွာကွီးထိုငျနရေငျမကောငျးဘူးကှ ..မမက အသိမြားတယျ…
တဈယောကျယောကျတှသှေ့ားရငျမကောငျးဘူး…) အငျး လာလသှေားရအောငျ.. (မမ မှာကားပါတယျ basement မှာရပျထားတယျ) ကားဆီသို့ရောကျသျော.. ဟာ မမကားကွီးကမိုကျလိုကျတာဗြာ Toyata Crown အနကျကွီး ကြှနျတျောမောငျးကွညျ့မယျရလား? (ရတာပေါ့ကှ… ရော့သော့ ) ကြှနျတျောကားကွီးကိုတကျမောငျးလိုကျသညျ..မမက ကြှနျတော့ဘေးတှငျထိုငျသညျ။ မမကို ဘေးတိုကျကွညျ့လိုကျရာ ဖောငျးတငျးမိုမောကျဖှံ့ထှားသောနို့ကွီးနှဈလုံးမှာ ဝတျထားသော အလပျစတဈ အကြီလေးအောကျမှ ပှငျ့ထှကျလာတော့မညျ့အတိုငျး… ကြှနျတျောသညျတံတှေးကိုမြိုခရြငျး အောကျမှ ညီတျောမောငျက နိုးထလာသညျ… မမဘယျသှားမလညျး? (မငျးသှားခငျြတဲ့ဆီသှား…ဒီနမေ့မအားတယျ ) အဲ့ဒါဆို တဈနရောရာသှားနားရအောငျနျော …ဟုဆိုကာ မောရှလေီ ဟျောတယျသို့မောငျးလိုကျသညျ။
(ဟဲ့ ဟျောတယျ ကွီးလား တဈယောကျယောကျတှသှေ့ားမှ ဟုပျပဖွေ့ဈနမေယျ… မငျးတိုကျခနျးမရှိဘူးလား? ) ဘယျလိုလုပျရှိမလညျးမမရဲ့ ကြှနျတျောက နယျကလာတာလေ …အဆောငျမှာနတော… ( ဩ… မမကွောကျတယျကှယျ…တဈယောကျယောကျတှသှေ့ားရငျ… ) ရပါတယျ မမရဲ့ မတှပေ့ါဘူးလာ ဆငျးပါ… သို့နှငျ့ ကမြမှာ Michel ဆိုသောကုလားကပွားကောငျလေးနဲ့ အရဲစှနျ့ကာ ဟျောတယျအခနျးထဲသို့ရောကျခဲ့သညျ။ အခနျးထဲရောကျသျော ကမြမှယေ့ာကွီးပေါတှငျ တငျပါးလှဲထိုငျရငျး ရငျတှတေဒိတျဒိတျခုနျနသေညျ။ သူက အကြီကိုခြှတျလိုကျပွီး ကမြဘေးတှငျလာထိုငျသညျ။ သူသညျ ဗလတောငျ့သညျ..ရငျဘတျတှငျ အမှေးမြားပေါကျနသေညျ။
သူက ကမြလကျကလေးကိုလာကိုငျကာ… ကမြမကျြနှာနားသို့ သူ့မကျြနှာကွီးကပျလာရာ ကမြမှာ မကျြလုံးလေးမြားကို အသာမှေးထားလိုကျသညျ။ ကမြနုတျခမျးဖူးဖူးလေးကို သူ့ပါးစပျကွီးနဲ့ စုတျယူခွငျးကိုခံလိုကျရသညျ။ ပွှတျပွှတျ… အှနျး အှနျး…အငျး …. ကမြခေါငျးလေးမော့သှားကာရငျလေးကော့တကျသှားရသညျ။ သူအနမျးကတဈဖွေးဖွေးကွမျးလာကာ သူ့လကျကွီးကလညျး ကမြ အကြီအောကျသို့ ရောကျလာပွီး ဘရာအပြော့လေးကိုပငျ့တငျကာနို့အုံကွီးကို ဂြုံနယျသကဲ့သို့နယျရငျး နိုသီခေါငျးလေးကိုဖိခလြေိုကျရာ ကမြမှာ ကကျြသီးတဖနျြးဖနျြးထသှားရသညျ။ အို…အငျး..အ. .အတျောကွာအောငျနမျးပွီးသျော ကမြအကြီကိုခြှတျလိုကျသညျ ပွီးနောကျတဈခုပွီးတဈခု နောကျဆုံးကမြကိုယျပျေါတှငျ ဘာအဝတျမှ မရှိတော့..မမရာ လှလိုကျတာ… (အို …မကွညျ့နဲ့ကှာ ရှကျတယျ.. ) အခုမမကို fbတှငျ တှပွေီ့း သူ့ကိုမရမက cb တှငျကွူ ကာနောကျဆုံးမှာ စျောကွီးက လိုကျလြော ခွငျးဖွဈသညျ။ စျောကွီးမှာခမျြးသာသညျ။
သူမယောကျကြားက Custom မှ အကောငျကွီး သူမနသေညျက ကြောကျကုနျးတှငျလုံးခငျြးတိုကျနဲ့ စီးသညျ့ကားက crown ကိုယျလုံးကိုယျပေါကျကလညျး ရှယျအကိတျ…ဒီလိုစျောကွီးကို သူ့အကွိုကျလိုးပေးလိုကျလို့ကတော့ ရမေီးအစုံပငျ… (ကဲ အဲ့လိုကွီးစိုကျမကွညျ့နနေဲ့ကှာ မမ မနတေတျဘူး ) ကောငျလေးသညျ သူ့အဝတျမြားကိုခြှတျလိုကျရာ သူ့ပေါငျကွားထဲမှ လီးကွီးမှာ မဲပွောငျကာ ကမြယောကျကြားထကျ သုံးဆခနျ့ကွီးသညျ။ အရှညျက ကမြစိတျထငျ ၈” ခနျ့ရှိပွီး အတုတျက pokkaဗူးလောကျရှိမညျ။ ကမြသူ့လီးကွီးကိုကွညျ့ရငျး စောကျဖုတျလေးကို ဇိကနဲညဈလိုကျမိသညျ။ သူသညျ လီးကွီးတဈရမျးရမျးနဲ့ ကမြဆီသိုလြှောကျလာပွီး ကမြ ပေါငျကွားထဲတှငျမတျတပျရပျကာ မှောကျအိပျပွီး ကမြပါးလေးကိုနမျးသညျ ပွီးလညျတိုငျလေး တဖနျ ကမြ နို့ကွီးနှဈလုံးအားအငနျးမရစို့လတေော့သညျ။
ကြှနျတျောသညျ သူမစောကျစဘေ့ေးကို လြှာနဲ့ထိုးကလျောပွီး နုတျခမျးနဲ့ခြိခဉျြစုတျသကဲ့သို့ စုတျလိုကျရာ သူမဖငျကွီးမှာ မှယေ့ာမှ မွောကျတကျလာကာကော့ပွနျနလေသေညျ။ သူမလကျနှဈဖကျမှာလညျး မှယေ့ာခငျးကို တငျးတငျးဆုတျ ဆှဲထားရငျး အား..အ..အမလေး…အမရေေ…ဘယျလိုလုပျနတောလညျး..မောငျရယျ..အ..အ..မ..ရ..တော့..ဘူးထှကျ..ထှကျ ကုနျပွီ..အား.ရှီး… အမရေေ..ကောငျးလိုကျတာ..အငျးအငိး.. သူမခန်တာကိုယျလေးမှာ တဆတျဆတျတုနျကာ သူမရှကြေုပျလေးထဲမှ စောကျရညျမြားက ပှကျကနဲ ပှကျကနဲ အနျကလြာသညျ။ ကြှနျတျောသညျ သူမအား အနားမပေးတော့ဘဲ ကြှနျတေျာ့ လီးကွီးကိုသူမအဖုတျအကှဲကွောငျးပျေါတှငျအမွောငျးလိုကျတငျထားကာ အထကျအောကျစုံဆနျပှတျပေးရငျးအစလေ့ေးကိုကျောကျောထိုးပေးနကော ဆတျကနဲ ထိုးထဲ့လိုကျရာ လီးဒဈကွီးမှာစောကျဖုတျကွီးထဲကြှံဝငျသှားရာ ဗွဈ..ဖလှတျ..အ..အမေ့ ..အ..နာနာတယျ မောငျ ဖွဈပါ့မလား မောငျ့ဟာကွီးက ကွီးကွီးဘဲ… ( ရပါတယျမမရဲ့ မမ စောကျဖုတျကွီးလညျး အကွီးကွီးပါဘဲ.. )ဟုပွောရငျးထပျထိုးထဲ့လိုကျရာ ဗွဈ ဗွဈဘှတျ .. အ..အ..အငျ့..မောငျ..ဖွေးဖွေး..ကှယျနာတယျ..
( အငျး ပါ မရဲ …မ စောကျဖုတျကွီးကလညျး ကွပျနတောဘဲနျော..အား ကောငျးလိုကျတာမရယျ… ) ထို့နောကျ ကြှနျတျောသညျ သူမစောကျဖုတျထဲသို့ ထပျမထိုးထဲ့သေးဘဲ တဈဝကျခနျ့သာခြော့လိုးလေးလိုးပေးနလေိုကျသညျ။ အဝငျနညျးနညျးခြောလာကာမှ သူမ ပေါငျနှဈခြောငျးကို ပုခုံးပျေါမတငျကာ ခါးအားနဲ့ ဆောငျ့ထညျ့လိုကျရာ… ဗွဈ ဘှတျ ဒုတျ အား … အမရေေ သပေါပွီ..အမလေး ဘယျလိုလုပျတာလညျးမောငျရယျ သပေါပွီ… အောငျ့ ပွီးကဉျြသှားတာဘဲကှာ… သူမလကျဖဝါးနဲ့ ကြှနျတော့ခါးကို တှနျးထားကာ မကျြနှာလေးမှာရှုံမဲ့နသေညျ။ ထို့နောကျလီးကွီးကို အဆုံးထိ အောငျထညျ့ထားရငျး အထဲတှငျပငျအခကျြ၂၀ခနျ့ ဆကျတိုကျ တောငျ့လိုးပေးလိုကျရာ ..အ..အ..အမလေး..အမလေး..သပွေီ.. သပွေီ.. အငျ့ အငျ့ ..မောငျ…သပွေီ..သူသညျသူ့ လီးတုတျတုတျရှညျရှညျကွီးကို အဆုံးထိအောငျထိုးထညျ့ရငျးဆောငျ့လိုးနရော..သားအိမျခေါငျးကို လာလာထိုးနရော တဈကိုယျလုံးဓာတျလိုကျသကဲ့သို့ ကဉျြသှားလသေညျ။ ထို့နောကျတှငျတော့ သူ့လီးကွီးနဲ့ တဈခကျြခွငျး စိမျပွနေပွလေိုးလတေော့သညျ။ သူ့ လီးကွီးမှာ စောကျဖုတျတဈခုလုံးပွညျ့ကွပျ နကော ကမြမှာ ကာမအရသာကို ဒငျးပွညျ့ကွပျပွညျ့ ခံစားနရေသညျ။
အ..အ..အငျ့..အငျ့..ဗှတျ ဘှတျ ပလှတျ အ..အငျ့..အငျ့..ဆောငျ့..ဆောငျ့..မောငျ.. မ ကိုမညှာ နဲ့ မ..ပွီးတော့မယျ..အငျ့..အငျ့..မောငျ ပွီးရငျ အထဲမှာ မပွီးလိုကျနဲ့နျော… ကြှနျတျောလညျး သူမ ဆောငျ့ဆိုသဖွငျ့ သူမခါးသိမျသိမျ လေးကိုကိုငျကာ အားရပါးရ တဖုံးဖုံးမွညျ အောငျကို ဆောငျ့ကာလိုးလိုကျရာ သူမမှာ အောကျတှငျ ကော့ပြံနအေောငျခံရငျး တဈခြီပွီးသှားလတေော့သညျ။ ကြှနျတျောလညျး အခကျြ ၅၀ခနျ့ကို တရစပျဆောငျ့လိုးရငျး ပွီးခငျြလာသဖွငျ့ လီးကွီးကိုဆှဲထုတျပွီး သူမ ပါးစပျနားသို့အလာ ထှကျသှားရာ လရညျမြားမှာ သုမ၏ ဖှံ့ထှားသောနို့ကွီးပျေါသို့ တဈခြို့ကသြှားပွီး သူမပါးစပျလေးဟပေးထားရာ လီးထိပျကွီးကို သူမ ပါးစပျအဝတှငျ ထားကာ လရညျမြားကို အားရပါးရ ပနျးထုတျလိုကျလရော သူမမှာ မကျြနှာလေးရှုံ့ မဲ့ကာ လရညျမြားကို တဂှပျဂှပျ မြိုခရြငျး လရညျမြားမှာမြားလှနျးသဖွငျ့ ပါးစောငျမှပငျစီးကွနလေသေညျ။
ထို့နောကျ တှငျတော့သူမသညျ ကြှနျတော့လီးကွီး ကို အငနျးမရ စုတျပေးကားဒဈကွီးလြှာလေးနဲ့ ယကျလိုကျ နှငျ့ စပယျရှယျ စုတျပေးနလေတေော့သညျ။ကမြလညျး သူ့လီးကွီးကို ပါးစပျလေးနဲ့ စိတျပါလကျပါစုတျနမေိသညျ။ သူ့လီးကွီးမှာ သံခြောငျးကွီးအလား မာတငျးလာပွနျသညျ။ ပွှတျပွှတျ.. ..အိုး..မောငျရယျ..သူ့ဟာကွိးကလညျး.. ကွောကျစရာကွီး ကွညျ့ပါအုံး ကှယျ… (ကဲလာ မမ နောကျတဈခြီ.. ) အိုကှယျ.. သူသညျ ကမြကို ဘေးတဈစောငျးထားကာ သူက ဘေးတဈစောငျးလှဲပွီး ပုဇှနျတုတျကှေး ပုံစံဖွငျ့ သူ့ လီးကွီးကို နောကျမှ တကေ့ာ ထိုးသှငျးလိုကျရာ ဗွဈ..အ.အမေ့ ..အ.. ဗပါငျနှဈခြောငျးက ပူးထားသောကွောငျ့ အဝငျက ပို၍ ကွပျသညျ။ အ..အငျ့..အငျ့… အ…မောငျ..အ.. ထို့နောကျ တှငျတော့ တရကွမျးဆောငျ့လိုးလတေော့သညျ။ အငျ့ …အငျ့….အ..အမေ့ ….
ကြှနျတျောသညျ နောကျမှနေ၍ သူမအားတဈ စောငျးလိုးရငျးသူမနို့ကွီးကို ဆုပျညဈရငျး နရကွမျးဆောငျ့လိုးလိုကျသညျ။ သူမမှာ တဈစောငျးလှဲ နသေဖွငျ့ သူမဖငျကွီးမှာ ပို၍တငျးရငးတငျး ရငျးရငျးနှငျ့ ကွညျ့၍ကောငျးလှပသေညျ။ (မမ လေးဖကျထောကျပေး ဗြာ.. ) သူမ မကျြစောငျးလှလှလေးထိုးရငျး မှယေ့ာကွီးပျေါတှငျ လေးဖကျထောကျပေးလသေညျ။ ထိုအခါမှ သူမဖငျကွီးနှဈလုံးမှာ ပိုပွီးတဈရဈထှကျလာသညျ။ ကြှနျတျောသညျ ဖောငျးတငျး ကာ ပွူးထှကျနသေော သူမစောကျဖုတျ အဝတှငျ လီးကွီးကိုတပွေီ့း ဆောငျ့ထိုးလျုကျရာ… ဗလှတျ ဘှတျ ဒုတျ. …အား အမလေး သပေါပွီ.. မောငျရယျ အရမျးဆောငျ့ထညျ့လိုကျတာ အောငျ့သှားတာဘဲကှာ …ထို့နောကျတှငျတော့ သူသညျ ကမြဖငျကွီးကို ဆုပျကိုငျကာ နောကျမှ တဖုနျးဖုနျး နဲ့ဆောငျ့ကာလိုးလတေော့သညျ။
အား… အငျ့..အငျ့..အ..အ..ဖောငျး..အ..ဖောငျး.. အငျ့ … ကြှနျတျောသညျသူမဖငျကွီးကို ဖွနျးကနဲရိုကျလိုကျ လိုးလိုကျ ကော့ထိုးလိုကျ စကောဝိုငျးလှညျ့လိုကျနဲ့ စိနျပွနေပွေ လိုးရငျး သူမ ဖငျ (စအို)လေးမှာ original အတိုငျးပငျရှိသေး ရာ ကြှနျတျောဝမျးသာသှားသညျ။ ဖငျအပြိုစငျလေးကို ပါကငျဖှငျ့ရတော့မညျ ဖွဈရာ ဝမျးသာသှားရသညျ။ လကျခလယျကို သူမစောကျရညျမြားသုတျကာ သူမဖငျ ထဲသို့ လကျခလယျ ကိုထိုးထဲ့လိုကျရာ … အ ..အို ..မောငျ ..ဘာတှပေေါကျကရလုပျနတောလညျးကှာ.. ဖငျကိုမလုပျနဲ့ကှာ… ( နညျးနညျး ကလိပေးတာပါ မမရဲ့ ပိုပွီးကောငျးအောငျလို့ ) သူမဖငျပေါကျလေးမှာကွပျနသေဖွငျ့ လကျခလညျကိုတောငျမနညျးထိုးနဲ့နရေသညျ။
…..အား အမရေေ..သပေါပွီ ..မောငျရယျ… အရမျးဘဲကှာ…အောငျ့သှားတာဘဲ…အားအား.. ထို့နောကျတှငျတော့ သူမမှာ သူမစိတျကွိုကျ ဖွေးဖွေး လေးလိုးနရေငျး ဖငျကွီးကို စကော ဝိုငျးလှညျ့ ကာလိုးလိုကျ …ခပျကွမျကွမျး လေးလိုးလိုကျနဲ့ အတျောကွာသျော သူမမှာတဈခြီ ပွီးသှားပွနျသညျ။ ထို့နောကျ ရခြေိုးပွီး ဟိုတယျမှထှကျလာခဲ့ကွသညျ။ ပွီး အဆာပွေ တဈခုခုဝငျစားကာ ကြှနျတော့အားသုံးဖို့ ပိုကျဆံတဈသိနျးပေးပွီး သျော သူမနဲ့လမျးခှဲလိုကျသညျ။ အဲ့နညေ့က ကမြ နှဈနှဈခြိုကျခြိုကျအိပျပြျောသှားသညျ။ နောကျတဈနေ့ မနကျကမြ နိုးသျော မနကျ၁၀နာရီတောငျရှိနပွေီ..ကမြရကေို တဈဝခြိုးလိုကျပွီး အောကျသို့ဆငျးလာကာ breakfast စားလိုကျသညျ။
ထို့နောကျစိတျပွလေကျပြောကျ ခွံထဲသို့ဆငျးကာ လမျးလြှောကျနစေဉျ ခွံထောငျ့တှငျ ရလေောငျးနသေော မာလီကုလား ကွီးက ကမြကိုကွညျ့နသေဖွငျ့ မာမူကွီး ရသေခြောလောငျးနျော… ဟု မကျြစောငျးလေးထိုးကာ ပွောလိုကျရာ..( ဟုပျကဲ့ပါအမား ) ကမြ သု့ရှမှေ့ ဖွတျလြှောကျသှားရာ ကမြခါးလေးကို ပိုနှဲ့ကာ ဖငျကွီးကိုရမျးခါကာလြှောကျသှားလိုကျသညျ။ နောကျမှ ဂလု ကနဲ တံတှေးမြိုခသြံကွားလိုကျရသညျ။ ကမြ လှညျ့ကွညျ့လိုကျရာ သူ့ပုဆိုးအောကျမှ ငေါထှကျနသေော အရာကိုတှလေို့ကျရသညျ။ ကမြ ပွုံးကွညျ့ရငျး မာမူကွီး အလုပျပွီးရငျ ရခြေိုးပွီးအပျေါတကျခဲ့ပွီး ကမြအခနျထဲကိုလာခဲ့ပါအုံး ခိုငျးစရာရှိလို့.. (ဟုပျ..ဟုပျကဲ့ပါအမား ) ကမြ အိပျခနျးထဲသို့ ရောကျသျော ညဝတျ အင်ျကြီ ပိုးဂါဝနျ အတိုလေးကိုဝတျကာ ကုတငျကွီးပျေါတှငျလှဲနရေငျး စိတျတှေ လှုပျရှားနမေိသညျ။
နာရီဝကျခနျ့အကွာတှငျ မာမူကွီးအခနျးဝသို့ရောကျလာသညျ။ အပျေါတှငျ စှတျကွယျအစုတျလေးဝတျထားရာ သူ့ရငျဘတျမှ ထူထဲစှာပေါကျနသေညျ့ အမှေးမဲမဲ မြားက အင်ျကြီ လေးအောကျမှာ ထှကျနကွေသညျ။ ပုဆိုးအောကျတှငျမူ သူ့ ဟာကွီးက ငေါငေါကွီးထှကျနသေညျ။ မာမူကွီး ကမြ ကို နညျးနညျးလကျေနှိပျပေးပါလား? … ဟု ပွောပွီး ကုတငျစောငျးလေးတှငျ ထိုငျလိုကျသညျ။ သူက ကမြဘေးတှငျလာထိုငျပွီး ခွထေောကျ တဈခြောငျးကို ကုတငျပျေါ သို့ တငျကာ ကမြနောကျတညျတညျ့ တှငျနရောယူပွီး သူ၏ သနျမာသောလကျကွီးနှဈဖကျက ကမြ ပုခုံးလေးကို ခပျဖှဖှ လေးလာကိုငျပွီး ဂုတျကိုအသာ နှိပျပေးသညျ ..
အား.အငျး …အငျး… ကောငျး လိုကျတာမာမူကွီးရယျ… ထိလိုကျတာ..အငျး..အ..နာတယျမာမူ ကွီး ဖွေးဖွေး..အငျး..အငျး..နောကျမှ သူ့မာမာအခြောငျးကွီးက ဖငျကွား ကိုလာထောကျနရော အသညျးယားနမေိသညျ။ ထို့နောကျတှငျတော့ သူသညျ ကမြအားဖကျကာ ကုတငျကွီးပျေါသို့ဆှဲလှခလြိုကျကာ ကမြ နုတျခမျးဖူးဖူးလေးကို သူ့ ကှမျးတံတှေးတှေ ပနေသေော နုခမျးထူထူကွီးနဲ့ နမျစုတျခွငျးကိုခံလိုကျရသညျ။ ပွှတျပွှတျ.. ..အှနျးအုအု ကမြ သူ့ကို အဲ့လောကျထိရဲလိမျ့မယျလို့မထငျထား။ကမြ မကျြလုံးလေးမြားမှေးစငျးသှားရပွီး သူ့အနမျးမြားကို မှတျသိပျစှာခံနမေိသညျ။
သူ့လီးကွီးမှာ Michel လီထကျတုတျသညျ၊ သိပျတော့မရှညျ၊ လီးဒဈကွီးမှာ ကှမျးသီးလုံးခနျ့ရှိပွီးပွဲအာနသေညျ၊ မွငျးလီးကွီးလောကျရှိသညျ။ သူ့လီးမဲမဲကွီးကို ပါးစပျလေးနဲ့ ခပျဖှဖှလေးစုတျလိုကျသညျ။လီးကွီးမှာ ကမြ ပါးစပျနဲ့ပငျ မဆနျ့ခငျြ… ပွှတျပွှတျ အှနျး အှနျး …( အ..အ..ကောငျးတယျမလေး..ဂှေးဥတှကောစုတျပေး..) ကြှနျတေျာ့လီးကွီးကို သူဌေး ကတျောကိုယျတိုငျက အားပါးရစုတျပေးနရော ကြှနျတျောမှာ စိတျတှပေိုလှုပျရှားကာ သူမခေါငျးလေးကို ဆုတျကိုငျပွီး လီးကွီးကို သူမ ပါးစပျထဲသို့ စောကျဖုတျလိုးသလိုပငျလိုးလိုကျသညျ။ ပွှတျ ပွှတျ..အူး ..အငျ့..အငျ့..အှနျး.. အ..သတေော့မှာဘဲ မာမူရယျ …အတငျးဘဲ .
(ကဲလာ လိုးရအောငျ… ) အိုး မာမူကလညျး ..သူကပွောလညျးပွော ကမြပျေါမှ တကျခှပွီး သူ့လီးကွီးကို စောကျဖုတျအဝတှငျတကေ့ာ ထိုးထဲ့လိုကျရာ ဗဈြ …အ..အမေ့..နာ.တယျ..မာမူကွီး.. ဗဈြ…ဗဈြ..အ..အာ…အမလေး..မကမြပျေါမှ တကျခှပွီး သူ့လီးကွီးကို စောကျဖုတျအဝတှငျတကေ့ာ ထိုးထဲ့လိုကျရာ ဗဈြ …အ..အမေ့..နာ.တယျ..မာမူကွီး.. ဗဈြ…ဗဈြ..အ..အာ…အမလေး..မာမူဟာကွီးက ကွီးလိုကျတာကှာ…ကှဲသှားပွီလားမသိဘူး.. ..ထို့နောကျသူကအဆုံးထိအောငျဆငျေ့ထညျ့လိုကျရာ အ..အ.မလေး..အမရေေ ..သပေါပွီတော့..
ထို့နောကျတှငျတော့ မာမူကွီးသညျ ကမြဖငျကွီးနှဈလုံးကို လကျနှဈုဖငျဆုပျကိုငျ ကာ တဈခကျြခွငျး တောငျ့ကာလိုးလတေော့သညျ။ အား..အမေ့..အ..အ….အငျ့ ..အငျ့.. သူက လီးကွီးကို စောငျးထိုးလိုကျ ကေျာ့ထိုးလိုကျ.. နညျးမြိုးစုံနှငျ့လိုးနရော ကမြမှာ ကာမအရသာကိုဒငျးပွညျ့ကွပျပွညျ့ ခံစားနရေသညျ။သူ့လီး ကွီးဝငျလာတိုငျး သူ့ဒဈကွီးက ကမြအစလေ့ေးကိုပှတျဆှဲကာ စောကျဖုတျအတှငျးသား နုနုလေး မြားကိုပှတျဆှဲသှားရာ အရမျးကိုကောင့းနရေသညျ။ သူအားနဲ့အဆုံးထိတောငျ့ထညျ့လိုကျတိုငျး သူ့လီးကွီးမှာ ရငျခေါငျးထဲအထိရောကျလာသကဲ့သို့ ခံစားနရေကာ အရမျးကောငျးလှနျးသော အရသာကို မခြိမဆနျ့ခံစားရငျး ခေါငျးအုံးလေးကို ပါးစပျနဲ့ကိုကျထားကာ အံလေးကွိတျကာခံနမေိသညျ။
အငျ့..ဗဈြ..ပလှတျ ဘှတျ ဘှတျ အငျ့..အငျ့..အား..ဟ..အား..မာ..မူ ကောငျး..ကောငျးလိုကျတာ..ဆောငျ့..ဆောငျ့..အ..အငျ့..အငျ့..အား..ပွီး..ပွီး..ပွီ..အား ရှီး…. အမလေး..အား….ကမြနောကျတဈခြီပွီးသှားသျောလညျး မာမူကွီးမှာ မပွီးသေး.. .(…အား.. ကောငျးလိုကျတာ မထှေးရယျ…. အားမလေး စောကျဖုတျ ကွီးက ကွပျနတောဘဲ ….မာမူလိုးတာကွိုကျလား..ကောငျးလား…မထှေး..) အ.. အငျ့… အငျး..ကွိုကျတယျ..အရမျးကောငျးတယျမာမူကွီးရယျ…အငျ့…အငျ့…ကြှနျတျောသညျ ကြှနျတျောသူဌေးကတျော သူဌေးမလေးကို အားရပါးရ လေးဖကျထောကျဖငျကုံးခိုငျးပွီး လိုးနရေသဖွငျ့ မာနျတကျပွီး လီးက လညျး မတရားသနျကာ တရကွမျးတဖုံးဖုံးနအေောငျဆောငျ့လိုးနသေညျ။ သူမမှာ လေးဖကျထောကျ နသေဖွငျ့ သူမနို့ကွီးနှဈလုံးမှာ လှုပျရမျးနကွေသညျ။
အား..အ..အမလေး…အငျ့….အငျ့….အ…သပွေီ…သပွေီ…မာ…မူ…အငျ့..အငျ့.. မာမူသညျ ကမြ၏နို့ကွီးနှဈလုံးအား လကျကွီးနှဈဖကျ ဖွငျ့ ဆုပျဆှဲပွီး တရစပျ လိုးနသေညျ။ ကမြမှာ…နောကျတခါပွီးခငျြလာပွနျသညျ။ ကမြ ပွီးသှားပွနျသညျ။ သူကလညျးလီးကွီးကို အပွငျဆှဲထုတျကာ ဖငျကွီးပျေါသို့ သူ့လရညျမြားကို ပနျးထုတျလိုကျလတေော့သညျ။… မာမူကွီးသညျ ဖငျကွီးပျေါမှ သူ့လရညျမြားကို လကျနှဈဖကျဖွငျ့ ပှတျကာ ဖငျကိုပှတျနရော ဖငျကွီးမှာပိုပွီးပွောငျတငျးနသေညျ။ အိုး …မာမူ ကလညျးကှာ သူ့အရညျတှေ နဲ့ပပှေကုနျပွီ..ကဲ..သှားတော့ကှာ…နောကျ ထှေး လိုအပျရငျ ချေါမယျနျော…ဩ ခဏနအေုံး ဟုပွောပွီး ဘီဒိုထဲမှ ပိုကျဆံတဈထကျကိုယူ ကာပေးလိုကျသညျ။ ပွီးနောကျ ကမြ မောမောနဲ့ ရခြေိုးခနျးထဲဝငျကာ bath tap ထဲတှငျ ရနှေေးနဲ့စိမျခြိုးလိုကျရာ.. တျောတျောလနျးသှားသညျ။ အိပျလိုကျလတေော့သညျ။
နောကျတဈနေ့ မနကျ အိပျယာ မှ နိုးနိုးခွငျး မကျြနှာသဈပွီး GYM စကျတှနေဲ့ အားကစားလုပျနလေိုကျသညျ။ ကမြက အားကစားနစေ့ဉျလုပျသဖွငျ့ ကမြကိုယျလုံးကိုယျပေါကျမှာ လှနခွေငျးဖွဈသညျ။ ကမြ ရမေိုးခြိုးပွီး ဘရိတျဖတျဆငျးစား ကာ ဧညျ့ခနျးတှငျထိုငျကာ ရုပျရှငျထိုငျကွညျ့နလေိုကျသညျ။ ကမြ နှဈရကျလောကျဘယျမှ မသှားဘဲနားလိုကျသညျ။ ဒီနေ့ မနကျ ကမြယောကျကြား မူဆယျဖကျမှ ပွနျလာသညျ။ ပွနျလာပွီးပွီးခွငျး (မိနျးမ ရာ… အရမျးလှမတောဘဲ လာကှာ လိုးရအောငျဟုပွောရငျးကမြအဝတျမြားကိုဆှဲခြှတျကာ နို့ကွီးတှကေို အငနျးမရ စို့လသေညျ။
အို..ကိုကွီးကလညျးကှာ … ကွညျ့ အရမျးဆိုးတာဘဲကှာ…အိုး..အှနျး.. သူ့လီးသေးသေးလေးကို စောကျဖုတျထဲ ထိုးထဲ့ကာ အတငျးလိုးလတေော့သညျ။ သိပျမကွာပါ..သူ့လရညျမြား ကမြစောကျဖုတျထဲသို့ ပနျးဝငျလာကာ ပွီးသှားလတေော့သညျ။ ကမြမှာသာ ဟိုမရောကျ ဒီမရောကျနှငျ့ ကနျြခဲ့သညျ။ကမြ ဂါဝနျတဈထပျတညျးဝတျပွီးအောကျသို့ဆငျးလာခဲ့ပွီး ခွံထဲတှငျ မာမူကွီးကိုရှာရာ မတှသေ့ဖွငျ့ သူနသေညျ့ ခွံထောငျ့ရှိ တနျးလြားသို့သှားပွီး သူ့အခနျးတံခါးကိုအသာဖှငျ့လိုကျရာ…မာမူ သညျ ကုတငျပျေါရှိမှယေ့ာပျေါတှငျထိုငျပွီး သူ့လီးကွီးကိုဂှငျးတိုကျနသေညျကိုတှလေို့ကျရသညျ။ ( ဟာ..မထှေး…ဘာဖဈလာတာလညျး..) ဘာမှမဖွဈဘူး ဟုပွောပွီး ကုတငျစောငျးတှငျ ထိုငျကာ စပနျ့ဂါဝနျ ကို မတငျလိုကျပွီး ပေါငျနှဈခြောငျးကို ကားကာ ….မာမူ..လာလေ.. လာလိုးပေးစမျးပါ…ပွောလိုကျရာ..ကုလားကွီးသညျ ရငေတျတုနျးရတှေငျးထဲကွသှားရသညျ။
သူ့အဝတျမြားကိုခြှတျပွီး ကမြပေါငျကွားထဲတှငျ မတျတရကျပွီး သူ့အျောလနျပွဲ လီးကွီးကို ကမြ စောကျဖုတျဘေးထဲသို့ ထိုးထညျ့လိုကျရာ…. ဗဈြ..အမေ့.. ဘှတျ..ဗြှတျ ဒုတျ..အား အမရေေ…ကောငျးလိုကျတာ..အား..အငျ့..အငျ့.. အမလေး..သပွေီ..သပွေီ..ကောငျး..ကောငျးတယျ..မာမူ ကွီးရယျ..ပွီးတော့မယျ..အားအား..ပွီး..ပွီး..ပွီ..အား..ရှီးကြှတျကြှတျ…မာမူကွီးသညျ တရကွမျး ဆောငျ့လိုးရငျး ခဏအကွာ သူ့လီးကွီးကို ဆှဲထုတျကာ ကမြ ပါးစပျထဲသို့ ထိုးထညျ့ပွီး သူ့လရညျမြားကိုပနျးထုတျလိုကျလရော ကမြ မှာ တရှိနျထိုးပနျးဝငျလာသော သူ့လရညျမြားကို တဂှပျဂှပျနဲ့မြိုခနြရေလသေညျ။ ပွီးသျော သူက ကမြအား ကုတငျဘေးတှငျ မတျတပျရပျစပွေီး ကုတငျပျေါကို လကျခေါကျခိုငျးကာ ကမြခါးလေးကို သူ့လကျကွီးနဲ့ ဆုပျကိုငျပွီး သူ့လီးကွီးကို ဆောငျ့ကာထိုးထဲ့လိုကျလရော သူ့လခြောငျးကွီးမှာ ကမြစောကျဖုတျလေးထဲသို့ လြှောကနဲ အဆုံးဝငျလာရာ ကမြမှာ ခါးလေးခှကျကာ ဖငျကွီးကို နောကျသို့ ပိုပဈထားပေးရငျး အားရပါးရခံနမေိတော့သညျ။
မာမူကွီး၏ ဆောငျ့ခကျြတှကေ ပွငျးလှနျးလှသညျ။ တဖုံးဖုံး နဲ့နအေောငျလိုးနလေသေညျ။ ထိုစဉျ.. [ ဟာ …မာမူ့အခနျးက အသံတှကွေားလို့ လာကွညျ့တာ ကွမျးလှခညျြ့လားဗြ… ဩ ဘယျသူမြားလညျးလို့ ဆရာကတျော လေး မထှေး ဘဲ…. ကုလားကွီးလိုးတာ တျောတျောကောငျးလား… ] အို… မဲကွီး… သူက ကမြယောကျကြား ရဲ့ ကားဒရိုငျဘာ. .. အို..ဒုက်ခ ပါဘဲ… မဲ..ကွီး.. ]ဘာမှ မကွောကျပါနဲ့ဗြာ… ပွနျမပြွာပါဘူး….. ဒါပမေဲ့ ကြုပျကို ပေးလိုးရငျပေါ့ … လေ… ကမြမှာ ယခုမှတော့ ဘာမှပွနျမပွောနိုငျတော့ဘူး ကုလား လီးကွီးကလညျး စောကျဖုတျထဲတှငျ လိုးသှငျးထားရကျ… ( ..ရတာပေါ့ မဲကွီးရာ..လာ..လိုးပါ.. ) ထို့နောကျမဲကွီးသညျ သူ့အဝတျမြားကို ခြှတျလိုကျရာ ပေါငျကွားထဲရှိ သူ့လီးမဲမဲကွီးမှာ တှဲလောငျးကွီးကွနကော အတုတျက ကုလားကွီးထကျတုတျသညျ။ လီးပတျပတျ လညျတှငျ အဖုမြားပွညျ့နသေညျ။
ကုလားကွီးသညျ သူ့လီးကွီးကို ဆှဲထုတျလိုကျရာ ဗလှတျ ကနဲ ကမြစောကျဖုတျထဲမှထှကျသှားသညျ။ ထို့နောကျမဲကွီးသညျ ကမြနောကျဖကျတှငျမတျတတျရပျကာ ကမြစောကျဖုတျဖောငျးဖောငျးကွီးကို လကျဝါးကွီးနှငျ့ ခပျဆပျဆပျလေးရိုကျကာ ဆုပျညဈလိုကျသညျ။ ပွီး သူ့ လီး ကွီးကို စောကျဖုတျအဝတှငျတပွေီ့း ထိုးသှငျး လိုကျရာ.. ဗဈြ ဗဈြ..ဗှတျ…အား..နာ..နာ..တယျ ကိုမဲကွီး…အ..အ..ကိုမဲကွီး လီးမှာ ဘာတှလေညျးဟငျဟငျ… အား..ဟ… အမလေး.သပေါပွီ… [ ဟဲ …ဟဲ..အဲတာ ဂျေါလီ လို့ချေါတယျ မထှေးရဲ့ …ကဲ ဂျေါလီလီးအရသာကိုမွညျးကွညျ့ လိုကျပါအူး … ] ဟုပွောပွီး ဆောငျ့လိုးရငျး ကမြဖငျကွီး ကို ဖွနျးကနဲ ဖွနျးကနဲ ရိုကျကာလိုးနလေသေညျ။
မဲကွီးရေ.. ရပွီ..ရပွီ..ကြေးဇူးပဲ..အေ့.. ) ကိုကွီး တံခါးလိုကျပိတျလိုကျအုံးမယျနျော.. ဟုပွောပွီး မဲကွီးနဲ့အတူ အခနျးထဲမှ လိုကျထှကျလာခဲ့သညျ။ တိုကျအောကျသို့ရောကျသျော မဲကွီးသညျကမြကိုယျလုံးလေးကို ခါးမှဆှဲကာဖကျလိုကျပွီး ကမြနုတျခမျးနှဈလှာကို သူ့ပါးစပျကွီးနဲ့ စုတျလိုကျကာ ကမြနို့ကွီးကို ဆုပျညဈလိုကျသညျ။ မထှေး ခဏနရေငျ ကြုပျ အခနျးကိုလာခဲ့ ကွားလား… ကမြ ခေါငျးလေးညှိမျ့ပွလိုကျသညျ။ သူလကျဖဝါးကွီးနှငျ့ ကမြဖငျကွီးကို ဖွနျးကနဲ ရိုကျလိုကျရာ …အိုး… အမေ့..ဖငျကွီးကို သူ့လကျကွီးနဲ့ ဖဈြညဈကာ ထှကျသှားလသေညျ။ ကမြလညျး အပျေါထပျသို့ပွနျတကျလာကာ အခနျးထဲသို့ကွညျ့လိုကျသျော ကမြယောကျကြား မှာ တခူးခူး နဲ့အိပျပြျောနလေတေော့သညျ။
ကမြမှာ မဲကွီးအလိုးကို မခံခငျြသျောလညျး မသှားလို့မဖွဈသောကွောငျ့ ကမြ အောကျသို့ဆငျးလာကာ ပေါငျမုနျ့ကွကျဥကွျောစားပွီး ကျောဖီ ခါးခါးတဈခှကျသောကျလိုကျသညျ။ုပီးနောကျ မဲကွီးနသေညျ့ ကားဂိုဒေါငျသို့ထှကျလာခဲ့သညျ။ ကားဂိုဒေါငျဘေးကလှကေား မှတကျလိုကျကာ သူ့အခနျးတံခါးကိုခေါကျလိုကျရာ မဲကွီးလာဖှငျ့သညျ…အခနျးထဲတှငျ မာမူ ကွီးလညျးရောကျနသေညျ။ ကွှပါဗြာ… ကြုပျတို့ရဲ့ သူဌေးမလေး အလိုးခံဖို့ရောကျလာပါပွီ။ ထို့နောကျမဲကွီးသညျ ကမြ ဖငျကွီးကို ဖနျြးကနဲနအေောငျရိုကျလိုကျရာ… အိုး ..အမေ့… ကမြ ၏ ဂါဝနျကိုဆှဲခြှတျလိုကျကာ ကမြ အား ကုတငျစောငျးတှငျထိုငျခိုငျးပွီး သူက ကမြ နုတျခမျး ကို စုတျလိုကျကာနို့ကွီးကို ဆုပျညဈကာနယျနသေညျ။ မာမူကွီးကလညျး ကမြ၏ နို့ကွီးတဈဖကျကို အားရပါစို့ကာ နိုသီးခေါငျးလေးကိုနုတျခမျးနဲ့စုတျဆှဲကာနရော ယောကျကြားနှဈယောကျနှငျ့ တပွိုငျတညျး အတူတူ ဆကျဆံနရော ကမြမှာစိတျတှအေရမျးလှုပျရှားနရေသညျ။ ထို့နောကျ မဲကွီးကကမြ ပေါငျကွားထဲသို့ ဝငျကာ ကမြစြာကျဖုတျကွီးကို လကျနှဈဖကျဖွငျု့ဖွဲကာ သူလြှာကွီးနဲ့ ယကျလိုကျကာ အစလေ့ေးကို ထိုးကလျောလိုကျ ခြိုခဉျြ စုတျသကဲ့သို့ စုတျနရော…ကမြမှာဖငျကွီးကိုကော့ကော့ပေးကာ..ခံနမေိလသေညျ။
မာမူကွီးက သူ့ပါးစပျကွီးနဲ့ ကမြနုတျခမျးလေးကို စုတျနမျးလိုကျပွနျသညျ။ ပွှတျပွှတျ.. ပလပျ..ပလပျ …အှနျး..အှနျး ..ဟငျ့ …. မဲကွီးသညျ စောကျစလေ့ေးကို စုတျကာ လကျခလယျဖွငျ့ ဖငျဝထဲသို့ ထိုးထဲ့ ပွီး လကျညိုးနဲ့ စောကျဖုတျကို ထညျ့ပွီး တွပျုငျတညျး ထိုးမှနေရော ..ကမြမှာ အရမျးကောငျးနပွေီး…တဈခြီပွီးသှားရလသေညျ။ ထို့နောကျမဲကွီးသညျ သူ့လီးကွီးကို ကမြပါးစပျနားသို့လာတရေ့ာ ကမြလညျး သူ့ဒဈပွဲပွဲလနျလနျကွီးကို ငုံလိုကျသညျ… ဖှဖှလေး စုတျပေးလိုကျရာ… [ အား..ကောငျး..ကောငျးတယျ… စုတျစုတျ..အေး..အေး..ဟုပျပွီ…ကြုပျဂှေးဥတှကေိုပါ စုတျ စမျး… လြှာနဲ့ယကျ ..ယကျ…အေး..ကောငျးတယျ…အား… ရှီး….ရပွီ..ရပွီ..ကဲပေါငျကား ထား…ဟုပျပွီ..ခငျဗြားကိုလိုးတော့မယျ…] ဟုပွောရငျး သူ့လီးကွီးကို ဆောငျ့ကာထိုးထဲ့လိုကျရာ… ဗဈြ …ဘှတျ…ဗလှတျ…အား..အမလေး…သပေါပွီ…မဲကွီးရယျ..အား..အငျ့..အငျ့…ထို့နောကျသူသညျ ကုတငျစောငျးတှငျ ကမြအားဖငျကိုတငျကာ ပေါငျကားခိုငျးပွီး သူကကုတငျဘေးမှာမတျတပျရပျကာ လိုးနရော ဆောငျ့အားလိုးအား ကောငျးလှသညျ။
ခါးကိုကော့ကော့ပွီး ဆောငျ့သှငျးလိုကျရငျ သူ့လီးကွီး မှာ ကမြသားအိမျထဲအထိပငျရောကျလာသလားထငျရသညျ။ ပွှတျ ဘှတျ ..ဗဈြ… ဗှတျ… ဘှတျ..ဗု..ဗု..အ..အငျ့..အငျ့..အမေ့..အိုး..အိုး…ပွီးပွီ.. .ပွီးပွီ.. အ.အမလေး…ကောငျးလိုကျတာ… ကမြမှာ..သူ့ဆောကျခကျြမြားကို.ခါးလေးကေျာ့ကာ ဖငျကွီးကိုမွောကျမွောကျပေး ရငျး တဈခြီပွီးသှားပွနျလသေညျ။… သူကလီးကွီးကိုဆှဲထုတျပွီး..[ မာမူကွီး…လာ.ခငျဗြား…လာလိုးပေးလိုကျစမျးပါအုံး..] မာမူကွီးကလညျး သု့မွငျးလီးကွီးတဈရမျးရမျး ဖွငျ့ ကမြပေါငျကွားထဲတှငျနရောယူကာ သူ့ လီးကွီးကိုဆောငျ့ သှငျးလိုကျရာ..ဗွဈ ဗလှတျ..အား..သပေါပွီ..အ..အငျ့..အငျ့…အမေ့… အ…အ..တရကွမျးလိုးလတေော့သညျ။
…အမလေး.. အမရေ…..အ..အ…မာ…မူ…အ…အ..ပွီးတော့မယျ…အငျ့..အငျ့…အားရှီး.. .ပွီးပွနျပွီ.. ..အ…အ အား..မာမူကွီးက အခကျြ၂၀ခနျ့ ဆောငျ့ကာလိုးပွီး သူ့လီးကွီးကို ဆှဲထုတျကာ ထှကျသှားပွနျသညျ။ ထို့နောကျတဖနျ မဲကွီးက ကမြအား လေးဖကျထောကျခိုငျးပွီး လိုးပွနျသညျ။ သူသညျ စောကျဖုတျကို လိုးနရေငျး..ဖငျထဲသို့ လကျညိုးထိုးထဲ့ပွီးမှနေသေညျ။ ပွီးနောကျ စောကျဖုတျကို လိုးနသေော လီးကွီးကို ဆှဲထုတျလိုကျပွီး ဖငျအဝတှငျ တံတှေးထှေးခကြာ..သူ့ လီးအျောလနျပွဲ ကွီးကို ဖငျအဝတှငျတကေ့ာ ထိုးသှငျးလိုကျရာ… မဝငျ…အရမျးကွပျနသေညျ…အား ..အား..နာ…နာ…တယျ..ဖငျကိုမလုပျပါနဲ့ ..မဲကွီးရယျ …အမတောငျးပနျပါတယျ…ရှကေို့မငျးကွိုကျသလိုလုပျပါ..အမ ဖငျ တဈခါမှ အလုပျမခံဖူးလို့ပါ… ကမြဘယျလိုပငျတောငျးပနျ တောငျးပနျ..မရ…သူ့လီးကွီးကိုသာ မရမက ထိုးထဲ့နရော..ဒဈကွီးမှာ ဗဈြ ကနဲ ဖငျထဲသို့ ဝငျလာရာ ဖငျခေါငျးတဈခုလုံး နာကဉျြကာ အောငျ့သှားရသညျ…အား…အမရေေ…သပေါပွီတော့.. .အ…အ…နားလိုကျတာ..အရမျးဘဲ… ပွနျထုတျပေးပါ မဲကွီးရယျ…
အဟငျ့..အဟငျ့..အရမျးနာ..နာ..လို့ပါ..[ခငျဗြား ကွီးကလညျး ..ငွိမျငွိမျခံစမျးပါ..ကြုပျလီးက ခငျဗြားဖငျကွီးခဲတောငျဝငျနပွေီ..အဲ့လို ဖငျကွီးမြိုးကို မှ ပါကငျဖှငျ့ပွီး ဖွုတျခငျြတာ…ပွီးမှ..ခငျဗြား ဖငျခံရတာ ကောငျးမှနျးသိလာမယျ….ဟား..ဟား… မထှေးထှေး….ခငျဗြား ဖငျကွီးကို ဖွုတျခငျြနောတာကွာပွီ…ဟား…ဟား…ကောငျးလိုကျတဲ့ … ဖငျကွီးကှာ…ကွပျနတောဘဲ… လီးကွိုးမှာတောငျကွောကျရတယျ…မာမူကွီး ကြုပျ ဘီဒိုပျေါက KYK Gel ဗူးယူခဲ့စမျးပါ..အငျး…ရပွီ..] သူသညျ လီးကွီး ဖငျခေါငျးထဲမှ ပွနျဆှဲထုတျပွီး ကမြ ဖငျ ထဲသို့ ဂယျြမြားကို လကျညိုးနဲ့ထိုးထဲ့ ကာ ဖငျအဝတှငျ အမြားကွီးသုတျကာ သူ့လီးကွီးကို တဖနျထပျထိုးထဲ့လိုကျရာ…ဗလှတျ…ဗြှတျ ..ကနဲ ဖငျထဲသို့ လီးဝငျသံနဲ့အတူ သူ့လီး ကွီးမှာလညျး သုံးပုံ တဈပုံခနျ့ ဝငျသှားရာ… ကမြ မှာ အရမျးနာကာ အောငျ့သှားရသောကွောငျ့ ကုံးထားသောဖငျကွီးမှာ ယမျးခါနလေသေညျ။ ….အား…အမရေေ…သပေါပွီ…အား….
ဖငျကှဲပါပွီ… မဲကွီးရယျ ….အား…အငျ့…အငျ့..အမလေး….လေး…ဖွေးဖွေး..လုပျပါနျော…အရမျး နာလို့ပါ….. မဲကွီးမှာ သူ့လီးကွီး ကို ဖငျထဲသို့ ဖွေးဖွေး ခငျြးသှငျးကာ…ကမြစောကျဖုတျကို လကျညိုးနဲ့လကျခလညျထိုးထဲ့ပွီး မှကော အစလေ့ေးကိုပှတျခပြေေးနရော… ကမြမှာ ဖငျထဲသို့ လီးဝငျသောအရသာကော စောကျဖုတျ ကိုကလိနသေော အရသာကော ပွိုငျတူ ခံစားနရေကာ …အား…အငျး… အ…အငျး… သူ့လီးကွီးမှာ ကမြဖငျထဲသို့ တဈထဈခွငျး တိုးဝငျနရော နောကျဆုံးတှငျ အဆုံးထိအောငျဝငျ သှားလတေော့သညျ။ ထို့နောကျသူသညျ လီးကွီးအား ပွနျဆှဲမထုတျသေးဘဲ အထဲတှငျ ဆယျကွိမျလောကျကော့ကော့ထိုးကာညှောငျ့ လိုကျရာ…အား… အမလေး…အ..အမေ…အမေ….အ…အ…အမလေး…သတေော့မှာဘဲ… သူ့ လီးကွီးမှာ ရငျခေါငျးထဲထိအောငျ ရောကျလာသလားဟုထငျရသညျ။.အူတှအေသညျးတှေ ဗွောငျးဆနျကုနျအောငျ..ခံစားနရေသညျ။
ထို့နောကျ သူ့လီးကွီးကို အဆုံးနီးပါပွနျဆှဲထုတျကာ ဖွေးဖွေးခငျြးပွနျထိုးထဲ့လိုကျသညျ…အား…အငျး…အငျး…သူ့လီးကွီး ပတျပတျလညျက ဂျေါလီမြားက ကမြဖငျခေါငျးထဲရှိ ကွှကျသားနံရံမြားကို ပှတျဆှဲသှားရာ …အား..အ… အမလေး…နာ…နာ..တယျ…အ…ကမြမှာ ကုတငျပျေါရှိ မှယေ့ာခငျးကို လကျနဲ့ ဆုပျဆှဲထားရငျး အံကိုကွိတျကာ အောကျနုတျခမျးကို သှားနဲ့ ဖိကိုကျထားကာ နာကဉျြသညျ့ ဝဒေနာကိုခံစားနရေသညျ။ ဖွေးဖွေး ခငျြး လိုးသှငျးနရော..အခကျြ၃၀ခနျ့ တှငျ ဖငျခေါငျးထဲသို့ လီးအဝငျခြောလာလသေညျ။ ထိုအခါ သူသညျ ကမြဖငျကွီးကို ဘယျပွနျညာပွနျ တဖနျြးဖနြိး ရိုကျကာ ခပျကွမျးကွမျးဆောငျ့လိုးလတေော့သညျ။ ဆယျခကျြခနျ့ ဆောငျ့ပွီးသျော ဖငျထဲမှ လီးကို အပွငျသို့ဆှဲထုတျလိုကျရာ ဖငျခေါငျးထဲမှ လမြေားက တဈဘုဘုနဲ့ အနျထှကျလာကွသညျ။ ပွီးမှပွနျထိုးထဲ့ကာလိုးပွနျသညျ။
ထိုသို့ လိုးနရေငျး မာမူကွီးကစောကျဖုတျကိုကလိနကော တှဲလောငျးကကြာ ဆောငျ့လိုးနသေောအရှိနျကွောငျ့ လှုပျရမျးနသေော ကမြနို့ကွီးကို ဆုပျညဈကာ ခနြေရော ကမြမှာ ပွီးသှားရပွနျသညျ။ ထို့နောကျတှငျတော့ မဲကွီးသညျ ကမြခါးသိမျသိမျလေးကို လကျနှဈဖကျဖွငျ့ဆုပိကိုငျကာ တဖုနျးဖုနျးနအေောငျဆောငျ့လိုးရငျး သု့လီးကွီးထဲမှ လရညျမြားက ကမြဖငျခေါငျးထဲသို့ ပူကနဲ ပူကနဲ ပနျးဝငျလာကွလတေော့သညျ။
အား…အား..အမေ့..အိုး…အိုး….အမေ့ …သပေါပွီ …သပွေီ…အမလေး…လေး…အိုး…အိုး…. ကမြ မှာ အမတေကာ အျောရငျး မှယေ့ာပျေါသို့ မှောကျခုံကွီးပဈကွသှားလတေော့သညျ။ သူသညျ လီးကွီးကို ဖငျထဲမှ ဆှဲထုတျလိုကျရာ … ဗလှတျ….ဘှတျ..ဘှတျ ….ဘူ..ဖငျထဲမှ လမြေားအနျထှကျလာပွီး သူ့လရညျမြားပါဖငျအဝလေးမှ စီးကွလာသညျ။ သူက ကမြဘေးတှငျ ပကျလကျလှဲကာ….. [အား…..ကောငျးလိုကျတာ….မထှေးရာ…. ခငျဗြားဖငျကွီးကို ကွညျ့ကွညျ့ပွီး လီးတောငျနတောကွာပွီ… ခုမှဘဲ အားရပါးရလိုးရတော့တယျ…..ကောငျးမှကောငျး…မာမူကွီး….ဆှဲလေ…..အရမျးကောငျးတယျ….အားရပါးရသာဆှဲ…. ကြုပျ အမောဖွလေိုကျအုံးမယျ… ] ထို့နောကျမာမူကွီးက ကမြအား ကုတငျ စောငျးသို့ဆှဲယူကာ ပေါငျနှဈခေါငျးကို သူ့ပုခုံးပျေါကိုမတငျပွီး သူ့လီးကွီးကို ကမြဖငျအဝတှငျတပွေီ့း ဆောငျ့သှငျးလိုကျရာ လီးကွီးမှာ ခုနက မဲကွီး ပွီးထားသော လရညျမြားကွောငျ့ လြှောကနဲ အဆုံးထိဝငျသှားရာ….
ဗလှတျ ဘှတျ…အ…အမလေး…သပေါပွီတော့….. ထို့နောကျတှငျတော့ တရကွမျးဆောငျ့လိုးကာ သူ့လရညျမြား ကို ဖငျခေါငျးထဲသို့ ပနျးထုတျလိုကျပွနျသညျ။ ပွီးနောကျသူလညျး ကမြဘေးတှငျလာလှဲ ပွီး အိပျပြျောသှားလတေော့သညျ။ ကမြလညျး အမောဖွကော သူ့တို့အခနျးထဲရှိ ရခြေိုးခနျးတှငျရခြေိုးပွီး အဝတျပွနျဝတျကာ ကမြတိုကျကွီးဖကျသို့ ပွနျကူးလာခဲသညျ။ လမျးပငျမလြှောကျနိုငျ…နာနသေဖွငျ့ ထိမျးပွီးလြှောကျလာခဲ့ပွီး အခနျးထဲသို့ရောငျသျော မှယေ့ာကွီးပျေါတှငျ အိပျပြျောနသေောကမြယောကျကြားကိုကွညျ့ကာ …. အဲ့ဒါရှငျမကောငျးလို့ ….ရှငျမကောငျးလို့….အဟငျ့….ဟငျ့….. ငိုနမေိသညျ။ နာရီကိုကွညျ့လိုကျရာ မနကျ ၃နာရီရှိပွီ။ ကမြမောမောနဲ့ အိပျပြျောသှားတော့သညျ။ crd
ကျမနာမည်က… ထွေးထွေးခင်၊ အသက်က ၃၅၊ ကျမမှာအပျိုမဟုပ်ပါ..ယောက်ကျားက အသက်ကြီးသည်၁၅နှစ်ခန့်ကွာသည်။ ကျမယောက်ကျားက custom ဦးစီးဆိုတော့ နယ်တွင်အနေများသည်။ ကျမ ခန္တာကိုယ်အချိုးအစားမှာ ၃၇ / ၂၅ / ၃၈ ရှိသဖြင့် မြင်သူတိုင်းလည်ပြန်ကြည့်ရသည့် အလှပိုင်ရှင်ဖြစ်သည်။ ကျမမှာ အိမ်တွင် အမြဲတမ်း တစ်ယောက်တည်းနေ နေရသောကြောင့် ပြင်းလာသည်။ ထို့ကြောင့် fb သုံးသည်။ fb သုံးရင်း ယောက်ကျားလေး မိတ်ဆွေတွေများလာသည်။ သူတိုနဲ့ ပျင်းရင် cb ကနေစကားပြောဖြစ်သည်။ တစ်ရက်တွင် ကျမ အကောင့်ထဲမှ ကောင်လေးတစ်ယောက်နဲ့ အပြင်တွင်တွေ့ဖို့ချိန်းလိုက်သည်။ ကျမ ရေမိုးချိုး အလှပြင်ပြီး သူချိန်းသည့် Ocean သို့ထွက်လာခဲ့သည်။
ကောင်လေးကအသက်၂၅ခန့်သာရှိသည်။ အသားညိုညို ကုလားဆင်လေးဖြစ်သည်။ အရပ်မြင့်သည်ဗလကောင်းကောင်း နှင့်ယောက်ကျားပီသပုံရသည်။ မင်းနာမည်က? ဩ ကျွန်တော့်နာမည်က Michel ပါခင်ဗျ။ မမက အပြင်မှာပိုလှတယ်… (အမလေး ..မြှောက်နေပြန်ပြီ..ဘာစားမလည်းပြော ) မမ က မောင်လေးစားချင်တာကျွေးမှာလား ? (ကျွေးမှာပေါ့ မောင်လေးရဲ့) နောက်မှပြောမယ်..မမ မကျွေးလို့ကတော့.. (အမလေး …ကျွေးပါမယ်ဆိုမှ …. ကဲ ဒီမှာ အကြာကြီးထိုင်နေရင်မကောင်းဘူးကွ ..မမက အသိများတယ်…
တစ်ယောက်ယောက်တွေ့သွားရင်မကောင်းဘူး…) အင်း လာလေသွားရအောင်.. (မမ မှာကားပါတယ် basement မှာရပ်ထားတယ်) ကားဆီသို့ရောက်သော်.. ဟာ မမကားကြီးကမိုက်လိုက်တာဗျာ Toyata Crown အနက်ကြီး ကျွန်တော်မောင်းကြည့်မယ်ရလား? (ရတာပေါ့ကွ… ရော့သော့ ) ကျွန်တော်ကားကြီးကိုတက်မောင်းလိုက်သည်..မမက ကျွန်တော့ဘေးတွင်ထိုင်သည်။ မမကို ဘေးတိုက်ကြည့်လိုက်ရာ ဖောင်းတင်းမိုမောက်ဖွံ့ထွားသောနို့ကြီးနှစ်လုံးမှာ ဝတ်ထားသော အလပ်စတစ် အကျီလေးအောက်မှ ပွင့်ထွက်လာတော့မည့်အတိုင်း… ကျွန်တော်သည်တံတွေးကိုမျိုချရင်း အောက်မှ ညီတော်မောင်က နိုးထလာသည်… မမဘယ်သွားမလည်း? (မင်းသွားချင်တဲ့ဆီသွား…ဒီနေ့မမအားတယ် ) အဲ့ဒါဆို တစ်နေရာရာသွားနားရအောင်နော် …ဟုဆိုကာ မောရွှေလီ ဟော်တယ်သို့မောင်းလိုက်သည်။
(ဟဲ့ ဟော်တယ် ကြီးလား တစ်ယောက်ယောက်တွေ့သွားမှ ဟုပ်ပေ့ဖြစ်နေမယ်… မင်းတိုက်ခန်းမရှိဘူးလား? ) ဘယ်လိုလုပ်ရှိမလည်းမမရဲ့ ကျွန်တော်က နယ်ကလာတာလေ …အဆောင်မှာနေတာ… ( ဩ… မမကြောက်တယ်ကွယ်…တစ်ယောက်ယောက်တွေ့သွားရင်… ) ရပါတယ် မမရဲ့ မတွေ့ပါဘူးလာ ဆင်းပါ… သို့နှင့် ကျမမှာ Michel ဆိုသောကုလားကပြားကောင်လေးနဲ့ အရဲစွန့်ကာ ဟော်တယ်အခန်းထဲသို့ရောက်ခဲ့သည်။ အခန်းထဲရောက်သော် ကျမမွှေ့ယာကြီးပေါတွင် တင်ပါးလွဲထိုင်ရင်း ရင်တွေတဒိတ်ဒိတ်ခုန်နေသည်။ သူက အကျီကိုချွတ်လိုက်ပြီး ကျမဘေးတွင်လာထိုင်သည်။ သူသည် ဗလတောင့်သည်..ရင်ဘတ်တွင် အမွေးများပေါက်နေသည်။
သူက ကျမလက်ကလေးကိုလာကိုင်ကာ… ကျမမျက်နှာနားသို့ သူ့မျက်နှာကြီးကပ်လာရာ ကျမမှာ မျက်လုံးလေးများကို အသာမှေးထားလိုက်သည်။ ကျမနုတ်ခမ်းဖူးဖူးလေးကို သူ့ပါးစပ်ကြီးနဲ့ စုတ်ယူခြင်းကိုခံလိုက်ရသည်။ ပြွတ်ပြွတ်… အွန်း အွန်း…အင်း …. ကျမခေါင်းလေးမော့သွားကာရင်လေးကော့တက်သွားရသည်။ သူအနမ်းကတစ်ဖြေးဖြေးကြမ်းလာကာ သူ့လက်ကြီးကလည်း ကျမ အကျီအောက်သို့ ရောက်လာပြီး ဘရာအပျော့လေးကိုပင့်တင်ကာနို့အုံကြီးကို ဂျုံနယ်သကဲ့သို့နယ်ရင်း နိုသီခေါင်းလေးကိုဖိချေလိုက်ရာ ကျမမှာ ကျက်သီးတဖျန်းဖျန်းထသွားရသည်။ အို…အင်း..အ. .အတော်ကြာအောင်နမ်းပြီးသော် ကျမအကျီကိုချွတ်လိုက်သည် ပြီးနောက်တစ်ခုပြီးတစ်ခု နောက်ဆုံးကျမကိုယ်ပေါ်တွင် ဘာအဝတ်မှ မရှိတော့..မမရာ လှလိုက်တာ… (အို …မကြည့်နဲ့ကွာ ရှက်တယ်.. ) အခုမမကို fbတွင် တွေ့ပြီး သူ့ကိုမရမက cb တွင်ကြူ ကာနောက်ဆုံးမှာ စော်ကြီးက လိုက်လျော ခြင်းဖြစ်သည်။ စော်ကြီးမှာချမ်းသာသည်။
သူမယောက်ကျားက Custom မှ အကောင်ကြီး သူမနေသည်က ကျောက်ကုန်းတွင်လုံးချင်းတိုက်နဲ့ စီးသည့်ကားက crown ကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါက်ကလည်း ရှယ်အကိတ်…ဒီလိုစော်ကြီးကို သူ့အကြိုက်လိုးပေးလိုက်လို့ကတော့ ရေမီးအစုံပင်… (ကဲ အဲ့လိုကြီးစိုက်မကြည့်နေနဲ့ကွာ မမ မနေတတ်ဘူး ) ကောင်လေးသည် သူ့အဝတ်များကိုချွတ်လိုက်ရာ သူ့ပေါင်ကြားထဲမှ လီးကြီးမှာ မဲပြောင်ကာ ကျမယောက်ကျားထက် သုံးဆခန့်ကြီးသည်။ အရှည်က ကျမစိတ်ထင် ၈” ခန့်ရှိပြီး အတုတ်က pokkaဗူးလောက်ရှိမည်။ ကျမသူ့လီးကြီးကိုကြည့်ရင်း စောက်ဖုတ်လေးကို ဇိကနဲညစ်လိုက်မိသည်။ သူသည် လီးကြီးတစ်ရမ်းရမ်းနဲ့ ကျမဆီသိုလျှောက်လာပြီး ကျမ ပေါင်ကြားထဲတွင်မတ်တပ်ရပ်ကာ မှောက်အိပ်ပြီး ကျမပါးလေးကိုနမ်းသည် ပြီးလည်တိုင်လေး တဖန် ကျမ နို့ကြီးနှစ်လုံးအားအငန်းမရစို့လေတော့သည်။
ကျွန်တော်သည် သူမစောက်စေ့ဘေးကို လျှာနဲ့ထိုးကလော်ပြီး နုတ်ခမ်းနဲ့ချိချဉ်စုတ်သကဲ့သို့ စုတ်လိုက်ရာ သူမဖင်ကြီးမှာ မွေ့ယာမှ မြောက်တက်လာကာကော့ပြန်နေလေသည်။ သူမလက်နှစ်ဖက်မှာလည်း မွေ့ယာခင်းကို တင်းတင်းဆုတ် ဆွဲထားရင်း အား..အ..အမလေး…အမေရေ…ဘယ်လိုလုပ်နေတာလည်း..မောင်ရယ်..အ..အ..မ..ရ..တော့..ဘူးထွက်..ထွက် ကုန်ပြီ..အား.ရှီး… အမေရေ..ကောင်းလိုက်တာ..အင်းအငိး.. သူမခန္တာကိုယ်လေးမှာ တဆတ်ဆတ်တုန်ကာ သူမရွှေကျုပ်လေးထဲမှ စောက်ရည်များက ပွက်ကနဲ ပွက်ကနဲ အန်ကျလာသည်။ ကျွန်တော်သည် သူမအား အနားမပေးတော့ဘဲ ကျွန်တော့် လီးကြီးကိုသူမအဖုတ်အကွဲကြောင်းပေါ်တွင်အမြောင်းလိုက်တင်ထားကာ အထက်အောက်စုံဆန်ပွတ်ပေးရင်းအစေ့လေးကိုကော်ကော်ထိုးပေးနေကာ ဆတ်ကနဲ ထိုးထဲ့လိုက်ရာ လီးဒစ်ကြီးမှာစောက်ဖုတ်ကြီးထဲကျွံဝင်သွားရာ ဗြစ်..ဖလွတ်..အ..အမေ့ ..အ..နာနာတယ် မောင် ဖြစ်ပါ့မလား မောင့်ဟာကြီးက ကြီးကြီးဘဲ… ( ရပါတယ်မမရဲ့ မမ စောက်ဖုတ်ကြီးလည်း အကြီးကြီးပါဘဲ.. )ဟုပြောရင်းထပ်ထိုးထဲ့လိုက်ရာ ဗြစ် ဗြစ်ဘွတ် .. အ..အ..အင့်..မောင်..ဖြေးဖြေး..ကွယ်နာတယ်..
( အင်း ပါ မရဲ …မ စောက်ဖုတ်ကြီးကလည်း ကြပ်နေတာဘဲနော်..အား ကောင်းလိုက်တာမရယ်… ) ထို့နောက် ကျွန်တော်သည် သူမစောက်ဖုတ်ထဲသို့ ထပ်မထိုးထဲ့သေးဘဲ တစ်ဝက်ခန့်သာချော့လိုးလေးလိုးပေးနေလိုက်သည်။ အဝင်နည်းနည်းချောလာကာမှ သူမ ပေါင်နှစ်ချောင်းကို ပုခုံးပေါ်မတင်ကာ ခါးအားနဲ့ ဆောင့်ထည့်လိုက်ရာ… ဗြစ် ဘွတ် ဒုတ် အား … အမေရေ သေပါပြီ..အမလေး ဘယ်လိုလုပ်တာလည်းမောင်ရယ် သေပါပြီ… အောင့် ပြီးကျဉ်သွားတာဘဲကွာ… သူမလက်ဖဝါးနဲ့ ကျွန်တော့ခါးကို တွန်းထားကာ မျက်နှာလေးမှာရှုံမဲ့နေသည်။ ထို့နောက်လီးကြီးကို အဆုံးထိ အောင်ထည့်ထားရင်း အထဲတွင်ပင်အချက်၂၀ခန့် ဆက်တိုက် တောင့်လိုးပေးလိုက်ရာ ..အ..အ..အမလေး..အမလေး..သေပြီ.. သေပြီ.. အင့် အင့် ..မောင်…သေပြီ..သူသည်သူ့ လီးတုတ်တုတ်ရှည်ရှည်ကြီးကို အဆုံးထိအောင်ထိုးထည့်ရင်းဆောင့်လိုးနေရာ..သားအိမ်ခေါင်းကို လာလာထိုးနေရာ တစ်ကိုယ်လုံးဓာတ်လိုက်သကဲ့သို့ ကျဉ်သွားလေသည်။ ထို့နောက်တွင်တော့ သူ့လီးကြီးနဲ့ တစ်ချက်ခြင်း စိမ်ပြေနပြေလိုးလေတော့သည်။ သူ့ လီးကြီးမှာ စောက်ဖုတ်တစ်ခုလုံးပြည့်ကြပ် နေကာ ကျမမှာ ကာမအရသာကို ဒင်းပြည့်ကြပ်ပြည့် ခံစားနေရသည်။
အ..အ..အင့်..အင့်..ဗွတ် ဘွတ် ပလွတ် အ..အင့်..အင့်..ဆောင့်..ဆောင့်..မောင်.. မ ကိုမညှာ နဲ့ မ..ပြီးတော့မယ်..အင့်..အင့်..မောင် ပြီးရင် အထဲမှာ မပြီးလိုက်နဲ့နော်… ကျွန်တော်လည်း သူမ ဆောင့်ဆိုသဖြင့် သူမခါးသိမ်သိမ် လေးကိုကိုင်ကာ အားရပါးရ တဖုံးဖုံးမြည် အောင်ကို ဆောင့်ကာလိုးလိုက်ရာ သူမမှာ အောက်တွင် ကော့ပျံနေအောင်ခံရင်း တစ်ချီပြီးသွားလေတော့သည်။ ကျွန်တော်လည်း အချက် ၅၀ခန့်ကို တရစပ်ဆောင့်လိုးရင်း ပြီးချင်လာသဖြင့် လီးကြီးကိုဆွဲထုတ်ပြီး သူမ ပါးစပ်နားသို့အလာ ထွက်သွားရာ လရည်များမှာ သုမ၏ ဖွံ့ထွားသောနို့ကြီးပေါ်သို့ တစ်ချို့ကျသွားပြီး သူမပါးစပ်လေးဟပေးထားရာ လီးထိပ်ကြီးကို သူမ ပါးစပ်အဝတွင် ထားကာ လရည်များကို အားရပါးရ ပန်းထုတ်လိုက်လေရာ သူမမှာ မျက်နှာလေးရှုံ့ မဲ့ကာ လရည်များကို တဂွပ်ဂွပ် မျိုချရင်း လရည်များမှာများလွန်းသဖြင့် ပါးစောင်မှပင်စီးကြနေလေသည်။
ထို့နောက် တွင်တော့သူမသည် ကျွန်တော့လီးကြီး ကို အငန်းမရ စုတ်ပေးကားဒစ်ကြီးလျှာလေးနဲ့ ယက်လိုက် နှင့် စပယ်ရှယ် စုတ်ပေးနေလေတော့သည်။ကျမလည်း သူ့လီးကြီးကို ပါးစပ်လေးနဲ့ စိတ်ပါလက်ပါစုတ်နေမိသည်။ သူ့လီးကြီးမှာ သံချောင်းကြီးအလား မာတင်းလာပြန်သည်။ ပြွတ်ပြွတ်.. ..အိုး..မောင်ရယ်..သူ့ဟာကြိးကလည်း.. ကြောက်စရာကြီး ကြည့်ပါအုံး ကွယ်… (ကဲလာ မမ နောက်တစ်ချီ.. ) အိုကွယ်.. သူသည် ကျမကို ဘေးတစ်စောင်းထားကာ သူက ဘေးတစ်စောင်းလှဲပြီး ပုဇွန်တုတ်ကွေး ပုံစံဖြင့် သူ့ လီးကြီးကို နောက်မှ တေ့ကာ ထိုးသွင်းလိုက်ရာ ဗြစ်..အ.အမေ့ ..အ.. ဗပါင်နှစ်ချောင်းက ပူးထားသောကြောင့် အဝင်က ပို၍ ကြပ်သည်။ အ..အင့်..အင့်… အ…မောင်..အ.. ထို့နောက် တွင်တော့ တရကြမ်းဆောင့်လိုးလေတော့သည်။ အင့် …အင့်….အ..အမေ့ ….
ကျွန်တော်သည် နောက်မှနေ၍ သူမအားတစ် စောင်းလိုးရင်းသူမနို့ကြီးကို ဆုပ်ညစ်ရင်း နရကြမ်းဆောင့်လိုးလိုက်သည်။ သူမမှာ တစ်စောင်းလှဲ နေသဖြင့် သူမဖင်ကြီးမှာ ပို၍တင်းရငးတင်း ရင်းရင်းနှင့် ကြည့်၍ကောင်းလှပေသည်။ (မမ လေးဖက်ထောက်ပေး ဗျာ.. ) သူမ မျက်စောင်းလှလှလေးထိုးရင်း မွေ့ယာကြီးပေါ်တွင် လေးဖက်ထောက်ပေးလေသည်။ ထိုအခါမှ သူမဖင်ကြီးနှစ်လုံးမှာ ပိုပြီးတစ်ရစ်ထွက်လာသည်။ ကျွန်တော်သည် ဖောင်းတင်း ကာ ပြူးထွက်နေသော သူမစောက်ဖုတ် အဝတွင် လီးကြီးကိုတေ့ပြီး ဆောင့်ထိုးလ်ုက်ရာ… ဗလွတ် ဘွတ် ဒုတ်. …အား အမလေး သေပါပြီ.. မောင်ရယ် အရမ်းဆောင့်ထည့်လိုက်တာ အောင့်သွားတာဘဲကွာ …ထို့နောက်တွင်တော့ သူသည် ကျမဖင်ကြီးကို ဆုပ်ကိုင်ကာ နောက်မှ တဖုန်းဖုန်း နဲ့ဆောင့်ကာလိုးလေတော့သည်။
အား… အင့်..အင့်..အ..အ..ဖောင်း..အ..ဖောင်း.. အင့် … ကျွန်တော်သည်သူမဖင်ကြီးကို ဖြန်းကနဲရိုက်လိုက် လိုးလိုက် ကော့ထိုးလိုက် စကောဝိုင်းလှည့်လိုက်နဲ့ စိန်ပြေနပြေ လိုးရင်း သူမ ဖင် (စအို)လေးမှာ original အတိုင်းပင်ရှိသေး ရာ ကျွန်တော်ဝမ်းသာသွားသည်။ ဖင်အပျိုစင်လေးကို ပါကင်ဖွင့်ရတော့မည် ဖြစ်ရာ ဝမ်းသာသွားရသည်။ လက်ခလယ်ကို သူမစောက်ရည်များသုတ်ကာ သူမဖင် ထဲသို့ လက်ခလယ် ကိုထိုးထဲ့လိုက်ရာ … အ ..အို ..မောင် ..ဘာတွေပေါက်ကရလုပ်နေတာလည်းကွာ.. ဖင်ကိုမလုပ်နဲ့ကွာ… ( နည်းနည်း ကလိပေးတာပါ မမရဲ့ ပိုပြီးကောင်းအောင်လို့ ) သူမဖင်ပေါက်လေးမှာကြပ်နေသဖြင့် လက်ခလည်ကိုတောင်မနည်းထိုးနဲ့နေရသည်။
…..အား အမေရေ..သေပါပြီ ..မောင်ရယ်… အရမ်းဘဲကွာ…အောင့်သွားတာဘဲ…အားအား.. ထို့နောက်တွင်တော့ သူမမှာ သူမစိတ်ကြိုက် ဖြေးဖြေး လေးလိုးနေရင်း ဖင်ကြီးကို စကော ဝိုင်းလှည့် ကာလိုးလိုက် …ခပ်ကြမ်ကြမ်း လေးလိုးလိုက်နဲ့ အတော်ကြာသော် သူမမှာတစ်ချီ ပြီးသွားပြန်သည်။ ထို့နောက် ရေချိုးပြီး ဟိုတယ်မှထွက်လာခဲ့ကြသည်။ ပြီး အဆာပြေ တစ်ခုခုဝင်စားကာ ကျွန်တော့အားသုံးဖို့ ပိုက်ဆံတစ်သိန်းပေးပြီး သော် သူမနဲ့လမ်းခွဲလိုက်သည်။ အဲ့နေ့ညက ကျမ နှစ်နှစ်ချိုက်ချိုက်အိပ်ပျော်သွားသည်။ နောက်တစ်နေ့ မနက်ကျမ နိုးသော် မနက်၁၀နာရီတောင်ရှိနေပြီ..ကျမရေကို တစ်ဝချိုးလိုက်ပြီး အောက်သို့ဆင်းလာကာ breakfast စားလိုက်သည်။
ထို့နောက်စိတ်ပြေလက်ပျောက် ခြံထဲသို့ဆင်းကာ လမ်းလျှောက်နေစဉ် ခြံထောင့်တွင် ရေလောင်းနေသော မာလီကုလား ကြီးက ကျမကိုကြည့်နေသဖြင့် မာမူကြီး ရေသေချာလောင်းနော်… ဟု မျက်စောင်းလေးထိုးကာ ပြောလိုက်ရာ..( ဟုပ်ကဲ့ပါအမား ) ကျမ သု့ရှေ့မှ ဖြတ်လျှောက်သွားရာ ကျမခါးလေးကို ပိုနွဲ့ကာ ဖင်ကြီးကိုရမ်းခါကာလျှောက်သွားလိုက်သည်။ နောက်မှ ဂလု ကနဲ တံတွေးမျိုချသံကြားလိုက်ရသည်။ ကျမ လှည့်ကြည့်လိုက်ရာ သူ့ပုဆိုးအောက်မှ ငေါထွက်နေသော အရာကိုတွေ့လိုက်ရသည်။ ကျမ ပြုံးကြည့်ရင်း မာမူကြီး အလုပ်ပြီးရင် ရေချိုးပြီးအပေါ်တက်ခဲ့ပြီး ကျမအခန်ထဲကိုလာခဲ့ပါအုံး ခိုင်းစရာရှိလို့.. (ဟုပ်..ဟုပ်ကဲ့ပါအမား ) ကျမ အိပ်ခန်းထဲသို့ ရောက်သော် ညဝတ် အင်္ကျီ ပိုးဂါဝန် အတိုလေးကိုဝတ်ကာ ကုတင်ကြီးပေါ်တွင်လှဲနေရင်း စိတ်တွေ လှုပ်ရှားနေမိသည်။
နာရီဝက်ခန့်အကြာတွင် မာမူကြီးအခန်းဝသို့ရောက်လာသည်။ အပေါ်တွင် စွတ်ကြယ်အစုတ်လေးဝတ်ထားရာ သူ့ရင်ဘတ်မှ ထူထဲစွာပေါက်နေသည့် အမွေးမဲမဲ များက အင်္ကျီ လေးအောက်မှာ ထွက်နေကြသည်။ ပုဆိုးအောက်တွင်မူ သူ့ ဟာကြီးက ငေါငေါကြီးထွက်နေသည်။ မာမူကြီး ကျမ ကို နည်းနည်းလေက်နှိပ်ပေးပါလား? … ဟု ပြောပြီး ကုတင်စောင်းလေးတွင် ထိုင်လိုက်သည်။ သူက ကျမဘေးတွင်လာထိုင်ပြီး ခြေထောက် တစ်ချောင်းကို ကုတင်ပေါ် သို့ တင်ကာ ကျမနောက်တည်တည့် တွင်နေရာယူပြီး သူ၏ သန်မာသောလက်ကြီးနှစ်ဖက်က ကျမ ပုခုံးလေးကို ခပ်ဖွဖွ လေးလာကိုင်ပြီး ဂုတ်ကိုအသာ နှိပ်ပေးသည် ..
အား.အင်း …အင်း… ကောင်း လိုက်တာမာမူကြီးရယ်… ထိလိုက်တာ..အင်း..အ..နာတယ်မာမူ ကြီး ဖြေးဖြေး..အင်း..အင်း..နောက်မှ သူ့မာမာအချောင်းကြီးက ဖင်ကြား ကိုလာထောက်နေရာ အသည်းယားနေမိသည်။ ထို့နောက်တွင်တော့ သူသည် ကျမအားဖက်ကာ ကုတင်ကြီးပေါ်သို့ဆွဲလှချလိုက်ကာ ကျမ နုတ်ခမ်းဖူးဖူးလေးကို သူ့ ကွမ်းတံတွေးတွေ ပေနေသော နုခမ်းထူထူကြီးနဲ့ နမ်စုတ်ခြင်းကိုခံလိုက်ရသည်။ ပြွတ်ပြွတ်.. ..အွန်းအုအု ကျမ သူ့ကို အဲ့လောက်ထိရဲလိမ့်မယ်လို့မထင်ထား။ကျမ မျက်လုံးလေးများမှေးစင်းသွားရပြီး သူ့အနမ်းများကို မွတ်သိပ်စွာခံနေမိသည်။
သူ့လီးကြီးမှာ Michel လီထက်တုတ်သည်၊ သိပ်တော့မရှည်၊ လီးဒစ်ကြီးမှာ ကွမ်းသီးလုံးခန့်ရှိပြီးပြဲအာနေသည်၊ မြင်းလီးကြီးလောက်ရှိသည်။ သူ့လီးမဲမဲကြီးကို ပါးစပ်လေးနဲ့ ခပ်ဖွဖွလေးစုတ်လိုက်သည်။လီးကြီးမှာ ကျမ ပါးစပ်နဲ့ပင် မဆန့်ချင်… ပြွတ်ပြွတ် အွန်း အွန်း …( အ..အ..ကောင်းတယ်မလေး..ဂွေးဥတွေကာစုတ်ပေး..) ကျွန်တော့်လီးကြီးကို သူဌေး ကတော်ကိုယ်တိုင်က အားပါးရစုတ်ပေးနေရာ ကျွန်တော်မှာ စိတ်တွေပိုလှုပ်ရှားကာ သူမခေါင်းလေးကို ဆုတ်ကိုင်ပြီး လီးကြီးကို သူမ ပါးစပ်ထဲသို့ စောက်ဖုတ်လိုးသလိုပင်လိုးလိုက်သည်။ ပြွတ် ပြွတ်..အူး ..အင့်..အင့်..အွန်း.. အ..သေတော့မှာဘဲ မာမူရယ် …အတင်းဘဲ .
(ကဲလာ လိုးရအောင်… ) အိုး မာမူကလည်း ..သူကပြောလည်းပြော ကျမပေါ်မှ တက်ခွပြီး သူ့လီးကြီးကို စောက်ဖုတ်အဝတွင်တေ့ကာ ထိုးထဲ့လိုက်ရာ ဗျစ် …အ..အမေ့..နာ.တယ်..မာမူကြီး.. ဗျစ်…ဗျစ်..အ..အာ…အမလေး..မကျမပေါ်မှ တက်ခွပြီး သူ့လီးကြီးကို စောက်ဖုတ်အဝတွင်တေ့ကာ ထိုးထဲ့လိုက်ရာ ဗျစ် …အ..အမေ့..နာ.တယ်..မာမူကြီး.. ဗျစ်…ဗျစ်..အ..အာ…အမလေး..မာမူဟာကြီးက ကြီးလိုက်တာကွာ…ကွဲသွားပြီလားမသိဘူး.. ..ထို့နောက်သူကအဆုံးထိအောင်ဆေင့်ထည့်လိုက်ရာ အ..အ.မလေး..အမေရေ ..သေပါပြီတော့..
ထို့နောက်တွင်တော့ မာမူကြီးသည် ကျမဖင်ကြီးနှစ်လုံးကို လက်နှစ်ုဖင်ဆုပ်ကိုင် ကာ တစ်ချက်ခြင်း တောင့်ကာလိုးလေတော့သည်။ အား..အမေ့..အ..အ….အင့် ..အင့်.. သူက လီးကြီးကို စောင်းထိုးလိုက် ကော့်ထိုးလိုက်.. နည်းမျိုးစုံနှင့်လိုးနေရာ ကျမမှာ ကာမအရသာကိုဒင်းပြည့်ကြပ်ပြည့် ခံစားနေရသည်။သူ့လီး ကြီးဝင်လာတိုင်း သူ့ဒစ်ကြီးက ကျမအစေ့လေးကိုပွတ်ဆွဲကာ စောက်ဖုတ်အတွင်းသား နုနုလေး များကိုပွတ်ဆွဲသွားရာ အရမ်းကိုကောင့းနေရသည်။ သူအားနဲ့အဆုံးထိတောင့်ထည့်လိုက်တိုင်း သူ့လီးကြီးမှာ ရင်ခေါင်းထဲအထိရောက်လာသကဲ့သို့ ခံစားနေရကာ အရမ်းကောင်းလွန်းသော အရသာကို မချိမဆန့်ခံစားရင်း ခေါင်းအုံးလေးကို ပါးစပ်နဲ့ကိုက်ထားကာ အံလေးကြိတ်ကာခံနေမိသည်။
အင့်..ဗျစ်..ပလွတ် ဘွတ် ဘွတ် အင့်..အင့်..အား..ဟ..အား..မာ..မူ ကောင်း..ကောင်းလိုက်တာ..ဆောင့်..ဆောင့်..အ..အင့်..အင့်..အား..ပြီး..ပြီး..ပြီ..အား ရှီး…. အမလေး..အား….ကျမနောက်တစ်ချီပြီးသွားသော်လည်း မာမူကြီးမှာ မပြီးသေး.. .(…အား.. ကောင်းလိုက်တာ မထွေးရယ်…. အားမလေး စောက်ဖုတ် ကြီးက ကြပ်နေတာဘဲ ….မာမူလိုးတာကြိုက်လား..ကောင်းလား…မထွေး..) အ.. အင့်… အင်း..ကြိုက်တယ်..အရမ်းကောင်းတယ်မာမူကြီးရယ်…အင့်…အင့်…ကျွန်တော်သည် ကျွန်တော်သူဌေးကတော် သူဌေးမလေးကို အားရပါးရ လေးဖက်ထောက်ဖင်ကုံးခိုင်းပြီး လိုးနေရသဖြင့် မာန်တက်ပြီး လီးက လည်း မတရားသန်ကာ တရကြမ်းတဖုံးဖုံးနေအောင်ဆောင့်လိုးနေသည်။ သူမမှာ လေးဖက်ထောက် နေသဖြင့် သူမနို့ကြီးနှစ်လုံးမှာ လှုပ်ရမ်းနေကြသည်။
အား..အ..အမလေး…အင့်….အင့်….အ…သေပြီ…သေပြီ…မာ…မူ…အင့်..အင့်.. မာမူသည် ကျမ၏နို့ကြီးနှစ်လုံးအား လက်ကြီးနှစ်ဖက် ဖြင့် ဆုပ်ဆွဲပြီး တရစပ် လိုးနေသည်။ ကျမမှာ…နောက်တခါပြီးချင်လာပြန်သည်။ ကျမ ပြီးသွားပြန်သည်။ သူကလည်းလီးကြီးကို အပြင်ဆွဲထုတ်ကာ ဖင်ကြီးပေါ်သို့ သူ့လရည်များကို ပန်းထုတ်လိုက်လေတော့သည်။… မာမူကြီးသည် ဖင်ကြီးပေါ်မှ သူ့လရည်များကို လက်နှစ်ဖက်ဖြင့် ပွတ်ကာ ဖင်ကိုပွတ်နေရာ ဖင်ကြီးမှာပိုပြီးပြောင်တင်းနေသည်။ အိုး …မာမူ ကလည်းကွာ သူ့အရည်တွေ နဲ့ပေပွကုန်ပြီ..ကဲ..သွားတော့ကွာ…နောက် ထွေး လိုအပ်ရင် ခေါ်မယ်နော်…ဩ ခဏနေအုံး ဟုပြောပြီး ဘီဒိုထဲမှ ပိုက်ဆံတစ်ထက်ကိုယူ ကာပေးလိုက်သည်။ ပြီးနောက် ကျမ မောမောနဲ့ ရေချိုးခန်းထဲဝင်ကာ bath tap ထဲတွင် ရေနွေးနဲ့စိမ်ချိုးလိုက်ရာ.. တော်တော်လန်းသွားသည်။ အိပ်လိုက်လေတော့သည်။
နောက်တစ်နေ့ မနက် အိပ်ယာ မှ နိုးနိုးခြင်း မျက်နှာသစ်ပြီး GYM စက်တွေနဲ့ အားကစားလုပ်နေလိုက်သည်။ ကျမက အားကစားနေ့စဉ်လုပ်သဖြင့် ကျမကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါက်မှာ လှနေခြင်းဖြစ်သည်။ ကျမ ရေမိုးချိုးပြီး ဘရိတ်ဖတ်ဆင်းစား ကာ ဧည့်ခန်းတွင်ထိုင်ကာ ရုပ်ရှင်ထိုင်ကြည့်နေလိုက်သည်။ ကျမ နှစ်ရက်လောက်ဘယ်မှ မသွားဘဲနားလိုက်သည်။ ဒီနေ့ မနက် ကျမယောက်ကျား မူဆယ်ဖက်မှ ပြန်လာသည်။ ပြန်လာပြီးပြီးခြင်း (မိန်းမ ရာ… အရမ်းလှမေတာဘဲ လာကွာ လိုးရအောင်ဟုပြောရင်းကျမအဝတ်များကိုဆွဲချွတ်ကာ နို့ကြီးတွေကို အငန်းမရ စို့လေသည်။
အို..ကိုကြီးကလည်းကွာ … ကြည့် အရမ်းဆိုးတာဘဲကွာ…အိုး..အွန်း.. သူ့လီးသေးသေးလေးကို စောက်ဖုတ်ထဲ ထိုးထဲ့ကာ အတင်းလိုးလေတော့သည်။ သိပ်မကြာပါ..သူ့လရည်များ ကျမစောက်ဖုတ်ထဲသို့ ပန်းဝင်လာကာ ပြီးသွားလေတော့သည်။ ကျမမှာသာ ဟိုမရောက် ဒီမရောက်နှင့် ကျန်ခဲ့သည်။ကျမ ဂါဝန်တစ်ထပ်တည်းဝတ်ပြီးအောက်သို့ဆင်းလာခဲ့ပြီး ခြံထဲတွင် မာမူကြီးကိုရှာရာ မတွေ့သဖြင့် သူနေသည့် ခြံထောင့်ရှိ တန်းလျားသို့သွားပြီး သူ့အခန်းတံခါးကိုအသာဖွင့်လိုက်ရာ…မာမူ သည် ကုတင်ပေါ်ရှိမွေ့ယာပေါ်တွင်ထိုင်ပြီး သူ့လီးကြီးကိုဂွင်းတိုက်နေသည်ကိုတွေ့လိုက်ရသည်။ ( ဟာ..မထွေး…ဘာဖစ်လာတာလည်း..) ဘာမှမဖြစ်ဘူး ဟုပြောပြီး ကုတင်စောင်းတွင် ထိုင်ကာ စပန့်ဂါဝန် ကို မတင်လိုက်ပြီး ပေါင်နှစ်ချောင်းကို ကားကာ ….မာမူ..လာလေ.. လာလိုးပေးစမ်းပါ…ပြောလိုက်ရာ..ကုလားကြီးသည် ရေငတ်တုန်းရေတွင်းထဲကြသွားရသည်။
သူ့အဝတ်များကိုချွတ်ပြီး ကျမပေါင်ကြားထဲတွင် မတ်တရက်ပြီး သူ့အော်လန်ပြဲ လီးကြီးကို ကျမ စောက်ဖုတ်ဘေးထဲသို့ ထိုးထည့်လိုက်ရာ…. ဗျစ်..အမေ့.. ဘွတ်..ဗျွတ် ဒုတ်..အား အမေရေ…ကောင်းလိုက်တာ..အား..အင့်..အင့်.. အမလေး..သေပြီ..သေပြီ..ကောင်း..ကောင်းတယ်..မာမူ ကြီးရယ်..ပြီးတော့မယ်..အားအား..ပြီး..ပြီး..ပြီ..အား..ရှီးကျွတ်ကျွတ်…မာမူကြီးသည် တရကြမ်း ဆောင့်လိုးရင်း ခဏအကြာ သူ့လီးကြီးကို ဆွဲထုတ်ကာ ကျမ ပါးစပ်ထဲသို့ ထိုးထည့်ပြီး သူ့လရည်များကိုပန်းထုတ်လိုက်လေရာ ကျမ မှာ တရှိန်ထိုးပန်းဝင်လာသော သူ့လရည်များကို တဂွပ်ဂွပ်နဲ့မျိုချနေရလေသည်။ ပြီးသော် သူက ကျမအား ကုတင်ဘေးတွင် မတ်တပ်ရပ်စေပြီး ကုတင်ပေါ်ကို လက်ခေါက်ခိုင်းကာ ကျမခါးလေးကို သူ့လက်ကြီးနဲ့ ဆုပ်ကိုင်ပြီး သူ့လီးကြီးကို ဆောင့်ကာထိုးထဲ့လိုက်လေရာ သူ့လချောင်းကြီးမှာ ကျမစောက်ဖုတ်လေးထဲသို့ လျှောကနဲ အဆုံးဝင်လာရာ ကျမမှာ ခါးလေးခွက်ကာ ဖင်ကြီးကို နောက်သို့ ပိုပစ်ထားပေးရင်း အားရပါးရခံနေမိတော့သည်။
မာမူကြီး၏ ဆောင့်ချက်တွေက ပြင်းလွန်းလှသည်။ တဖုံးဖုံး နဲ့နေအောင်လိုးနေလေသည်။ ထိုစဉ်.. [ ဟာ …မာမူ့အခန်းက အသံတွေကြားလို့ လာကြည့်တာ ကြမ်းလှချည့်လားဗျ… ဩ ဘယ်သူများလည်းလို့ ဆရာကတော် လေး မထွေး ဘဲ…. ကုလားကြီးလိုးတာ တော်တော်ကောင်းလား… ] အို… မဲကြီး… သူက ကျမယောက်ကျား ရဲ့ ကားဒရိုင်ဘာ. .. အို..ဒုက္ခ ပါဘဲ… မဲ..ကြီး.. ]ဘာမှ မကြောက်ပါနဲ့ဗျာ… ပြန်မျပြာပါဘူး….. ဒါပေမဲ့ ကျုပ်ကို ပေးလိုးရင်ပေါ့ … လေ… ကျမမှာ ယခုမှတော့ ဘာမှပြန်မပြောနိုင်တော့ဘူး ကုလား လီးကြီးကလည်း စောက်ဖုတ်ထဲတွင် လိုးသွင်းထားရက်… ( ..ရတာပေါ့ မဲကြီးရာ..လာ..လိုးပါ.. ) ထို့နောက်မဲကြီးသည် သူ့အဝတ်များကို ချွတ်လိုက်ရာ ပေါင်ကြားထဲရှိ သူ့လီးမဲမဲကြီးမှာ တွဲလောင်းကြီးကြနေကာ အတုတ်က ကုလားကြီးထက်တုတ်သည်။ လီးပတ်ပတ် လည်တွင် အဖုများပြည့်နေသည်။
ကုလားကြီးသည် သူ့လီးကြီးကို ဆွဲထုတ်လိုက်ရာ ဗလွတ် ကနဲ ကျမစောက်ဖုတ်ထဲမှထွက်သွားသည်။ ထို့နောက်မဲကြီးသည် ကျမနောက်ဖက်တွင်မတ်တတ်ရပ်ကာ ကျမစောက်ဖုတ်ဖောင်းဖောင်းကြီးကို လက်ဝါးကြီးနှင့် ခပ်ဆပ်ဆပ်လေးရိုက်ကာ ဆုပ်ညစ်လိုက်သည်။ ပြီး သူ့ လီး ကြီးကို စောက်ဖုတ်အဝတွင်တေ့ပြီး ထိုးသွင်း လိုက်ရာ.. ဗျစ် ဗျစ်..ဗွတ်…အား..နာ..နာ..တယ် ကိုမဲကြီး…အ..အ..ကိုမဲကြီး လီးမှာ ဘာတွေလည်းဟင်ဟင်… အား..ဟ… အမလေး.သေပါပြီ… [ ဟဲ …ဟဲ..အဲတာ ဂေါ်လီ လို့ခေါ်တယ် မထွေးရဲ့ …ကဲ ဂေါ်လီလီးအရသာကိုမြည်းကြည့် လိုက်ပါအူး … ] ဟုပြောပြီး ဆောင့်လိုးရင်း ကျမဖင်ကြီး ကို ဖြန်းကနဲ ဖြန်းကနဲ ရိုက်ကာလိုးနေလေသည်။
မဲကြီးရေ.. ရပြီ..ရပြီ..ကျေးဇူးပဲ..အေ့.. ) ကိုကြီး တံခါးလိုက်ပိတ်လိုက်အုံးမယ်နော်.. ဟုပြောပြီး မဲကြီးနဲ့အတူ အခန်းထဲမှ လိုက်ထွက်လာခဲ့သည်။ တိုက်အောက်သို့ရောက်သော် မဲကြီးသည်ကျမကိုယ်လုံးလေးကို ခါးမှဆွဲကာဖက်လိုက်ပြီး ကျမနုတ်ခမ်းနှစ်လွှာကို သူ့ပါးစပ်ကြီးနဲ့ စုတ်လိုက်ကာ ကျမနို့ကြီးကို ဆုပ်ညစ်လိုက်သည်။ မထွေး ခဏနေရင် ကျုပ် အခန်းကိုလာခဲ့ ကြားလား… ကျမ ခေါင်းလေးညှိမ့်ပြလိုက်သည်။ သူလက်ဖဝါးကြီးနှင့် ကျမဖင်ကြီးကို ဖြန်းကနဲ ရိုက်လိုက်ရာ …အိုး… အမေ့..ဖင်ကြီးကို သူ့လက်ကြီးနဲ့ ဖျစ်ညစ်ကာ ထွက်သွားလေသည်။ ကျမလည်း အပေါ်ထပ်သို့ပြန်တက်လာကာ အခန်းထဲသို့ကြည့်လိုက်သော် ကျမယောက်ကျား မှာ တခူးခူး နဲ့အိပ်ပျော်နေလေတော့သည်။
ကျမမှာ မဲကြီးအလိုးကို မခံချင်သော်လည်း မသွားလို့မဖြစ်သောကြောင့် ကျမ အောက်သို့ဆင်းလာကာ ပေါင်မုန့်ကြက်ဥကြော်စားပြီး ကော်ဖီ ခါးခါးတစ်ခွက်သောက်လိုက်သည်။ုပီးနောက် မဲကြီးနေသည့် ကားဂိုဒေါင်သို့ထွက်လာခဲ့သည်။ ကားဂိုဒေါင်ဘေးကလှေကား မှတက်လိုက်ကာ သူ့အခန်းတံခါးကိုခေါက်လိုက်ရာ မဲကြီးလာဖွင့်သည်…အခန်းထဲတွင် မာမူ ကြီးလည်းရောက်နေသည်။ ကြွပါဗျာ… ကျုပ်တို့ရဲ့ သူဌေးမလေး အလိုးခံဖို့ရောက်လာပါပြီ။ ထို့နောက်မဲကြီးသည် ကျမ ဖင်ကြီးကို ဖျန်းကနဲနေအောင်ရိုက်လိုက်ရာ… အိုး ..အမေ့… ကျမ ၏ ဂါဝန်ကိုဆွဲချွတ်လိုက်ကာ ကျမ အား ကုတင်စောင်းတွင်ထိုင်ခိုင်းပြီး သူက ကျမ နုတ်ခမ်း ကို စုတ်လိုက်ကာနို့ကြီးကို ဆုပ်ညစ်ကာနယ်နေသည်။ မာမူကြီးကလည်း ကျမ၏ နို့ကြီးတစ်ဖက်ကို အားရပါစို့ကာ နိုသီးခေါင်းလေးကိုနုတ်ခမ်းနဲ့စုတ်ဆွဲကာနေရာ ယောက်ကျားနှစ်ယောက်နှင့် တပြိုင်တည်း အတူတူ ဆက်ဆံနေရာ ကျမမှာစိတ်တွေအရမ်းလှုပ်ရှားနေရသည်။ ထို့နောက် မဲကြီးကကျမ ပေါင်ကြားထဲသို့ ဝင်ကာ ကျမျစာက်ဖုတ်ကြီးကို လက်နှစ်ဖက်ဖြင့်ုဖြဲကာ သူလျှာကြီးနဲ့ ယက်လိုက်ကာ အစေ့လေးကို ထိုးကလော်လိုက် ချိုချဉ် စုတ်သကဲ့သို့ စုတ်နေရာ…ကျမမှာဖင်ကြီးကိုကော့ကော့ပေးကာ..ခံနေမိလေသည်။
မာမူကြီးက သူ့ပါးစပ်ကြီးနဲ့ ကျမနုတ်ခမ်းလေးကို စုတ်နမ်းလိုက်ပြန်သည်။ ပြွတ်ပြွတ်.. ပလပ်..ပလပ် …အွန်း..အွန်း ..ဟင့် …. မဲကြီးသည် စောက်စေ့လေးကို စုတ်ကာ လက်ခလယ်ဖြင့် ဖင်ဝထဲသို့ ထိုးထဲ့ ပြီး လက်ညိုးနဲ့ စောက်ဖုတ်ကို ထည့်ပြီး တြပ်ုင်တည်း ထိုးမွေနေရာ ..ကျမမှာ အရမ်းကောင်းနေပြီး…တစ်ချီပြီးသွားရလေသည်။ ထို့နောက်မဲကြီးသည် သူ့လီးကြီးကို ကျမပါးစပ်နားသို့လာတေ့ရာ ကျမလည်း သူ့ဒစ်ပြဲပြဲလန်လန်ကြီးကို ငုံလိုက်သည်… ဖွဖွလေး စုတ်ပေးလိုက်ရာ… [ အား..ကောင်း..ကောင်းတယ်… စုတ်စုတ်..အေး..အေး..ဟုပ်ပြီ…ကျုပ်ဂွေးဥတွေကိုပါ စုတ် စမ်း… လျှာနဲ့ယက် ..ယက်…အေး..ကောင်းတယ်…အား… ရှီး….ရပြီ..ရပြီ..ကဲပေါင်ကား ထား…ဟုပ်ပြီ..ခင်ဗျားကိုလိုးတော့မယ်…] ဟုပြောရင်း သူ့လီးကြီးကို ဆောင့်ကာထိုးထဲ့လိုက်ရာ… ဗျစ် …ဘွတ်…ဗလွတ်…အား..အမလေး…သေပါပြီ…မဲကြီးရယ်..အား..အင့်..အင့်…ထို့နောက်သူသည် ကုတင်စောင်းတွင် ကျမအားဖင်ကိုတင်ကာ ပေါင်ကားခိုင်းပြီး သူကကုတင်ဘေးမှာမတ်တပ်ရပ်ကာ လိုးနေရာ ဆောင့်အားလိုးအား ကောင်းလှသည်။
ခါးကိုကော့ကော့ပြီး ဆောင့်သွင်းလိုက်ရင် သူ့လီးကြီး မှာ ကျမသားအိမ်ထဲအထိပင်ရောက်လာသလားထင်ရသည်။ ပြွတ် ဘွတ် ..ဗျစ်… ဗွတ်… ဘွတ်..ဗု..ဗု..အ..အင့်..အင့်..အမေ့..အိုး..အိုး…ပြီးပြီ.. .ပြီးပြီ.. အ.အမလေး…ကောင်းလိုက်တာ… ကျမမှာ..သူ့ဆောက်ချက်များကို.ခါးလေးကော့်ကာ ဖင်ကြီးကိုမြောက်မြောက်ပေး ရင်း တစ်ချီပြီးသွားပြန်လေသည်။… သူကလီးကြီးကိုဆွဲထုတ်ပြီး..[ မာမူကြီး…လာ.ခင်ဗျား…လာလိုးပေးလိုက်စမ်းပါအုံး..] မာမူကြီးကလည်း သု့မြင်းလီးကြီးတစ်ရမ်းရမ်း ဖြင့် ကျမပေါင်ကြားထဲတွင်နေရာယူကာ သူ့ လီးကြီးကိုဆောင့် သွင်းလိုက်ရာ..ဗြစ် ဗလွတ်..အား..သေပါပြီ..အ..အင့်..အင့်…အမေ့… အ…အ..တရကြမ်းလိုးလေတော့သည်။
…အမလေး.. အမေရ…..အ..အ…မာ…မူ…အ…အ..ပြီးတော့မယ်…အင့်..အင့်…အားရှီး.. .ပြီးပြန်ပြီ.. ..အ…အ အား..မာမူကြီးက အချက်၂၀ခန့် ဆောင့်ကာလိုးပြီး သူ့လီးကြီးကို ဆွဲထုတ်ကာ ထွက်သွားပြန်သည်။ ထို့နောက်တဖန် မဲကြီးက ကျမအား လေးဖက်ထောက်ခိုင်းပြီး လိုးပြန်သည်။ သူသည် စောက်ဖုတ်ကို လိုးနေရင်း..ဖင်ထဲသို့ လက်ညိုးထိုးထဲ့ပြီးမွှေနေသည်။ ပြီးနောက် စောက်ဖုတ်ကို လိုးနေသော လီးကြီးကို ဆွဲထုတ်လိုက်ပြီး ဖင်အဝတွင် တံတွေးထွေးချကာ..သူ့ လီးအော်လန်ပြဲ ကြီးကို ဖင်အဝတွင်တေ့ကာ ထိုးသွင်းလိုက်ရာ… မဝင်…အရမ်းကြပ်နေသည်…အား ..အား..နာ…နာ…တယ်..ဖင်ကိုမလုပ်ပါနဲ့ ..မဲကြီးရယ် …အမတောင်းပန်ပါတယ်…ရှေ့ကိုမင်းကြိုက်သလိုလုပ်ပါ..အမ ဖင် တစ်ခါမှ အလုပ်မခံဖူးလို့ပါ… ကျမဘယ်လိုပင်တောင်းပန် တောင်းပန်..မရ…သူ့လီးကြီးကိုသာ မရမက ထိုးထဲ့နေရာ..ဒစ်ကြီးမှာ ဗျစ် ကနဲ ဖင်ထဲသို့ ဝင်လာရာ ဖင်ခေါင်းတစ်ခုလုံး နာကျဉ်ကာ အောင့်သွားရသည်…အား…အမေရေ…သေပါပြီတော့.. .အ…အ…နားလိုက်တာ..အရမ်းဘဲ… ပြန်ထုတ်ပေးပါ မဲကြီးရယ်…
အဟင့်..အဟင့်..အရမ်းနာ..နာ..လို့ပါ..[ခင်ဗျား ကြီးကလည်း ..ငြိမ်ငြိမ်ခံစမ်းပါ..ကျုပ်လီးက ခင်ဗျားဖင်ကြီးခဲတောင်ဝင်နေပြီ..အဲ့လို ဖင်ကြီးမျိုးကို မှ ပါကင်ဖွင့်ပြီး ဖြုတ်ချင်တာ…ပြီးမှ..ခင်ဗျား ဖင်ခံရတာ ကောင်းမှန်းသိလာမယ်….ဟား..ဟား… မထွေးထွေး….ခင်ဗျား ဖင်ကြီးကို ဖြုတ်ချင်နောတာကြာပြီ…ဟား…ဟား…ကောင်းလိုက်တဲ့ … ဖင်ကြီးကွာ…ကြပ်နေတာဘဲ… လီးကြိုးမှာတောင်ကြောက်ရတယ်…မာမူကြီး ကျုပ် ဘီဒိုပေါ်က KYK Gel ဗူးယူခဲ့စမ်းပါ..အင်း…ရပြီ..] သူသည် လီးကြီး ဖင်ခေါင်းထဲမှ ပြန်ဆွဲထုတ်ပြီး ကျမ ဖင် ထဲသို့ ဂျယ်များကို လက်ညိုးနဲ့ထိုးထဲ့ ကာ ဖင်အဝတွင် အများကြီးသုတ်ကာ သူ့လီးကြီးကို တဖန်ထပ်ထိုးထဲ့လိုက်ရာ…ဗလွတ်…ဗျွတ် ..ကနဲ ဖင်ထဲသို့ လီးဝင်သံနဲ့အတူ သူ့လီး ကြီးမှာလည်း သုံးပုံ တစ်ပုံခန့် ဝင်သွားရာ… ကျမ မှာ အရမ်းနာကာ အောင့်သွားရသောကြောင့် ကုံးထားသောဖင်ကြီးမှာ ယမ်းခါနေလေသည်။ ….အား…အမေရေ…သေပါပြီ…အား….
ဖင်ကွဲပါပြီ… မဲကြီးရယ် ….အား…အင့်…အင့်..အမလေး….လေး…ဖြေးဖြေး..လုပ်ပါနော်…အရမ်း နာလို့ပါ….. မဲကြီးမှာ သူ့လီးကြီး ကို ဖင်ထဲသို့ ဖြေးဖြေး ချင်းသွင်းကာ…ကျမစောက်ဖုတ်ကို လက်ညိုးနဲ့လက်ခလည်ထိုးထဲ့ပြီး မွှေကာ အစေ့လေးကိုပွတ်ချေပေးနေရာ… ကျမမှာ ဖင်ထဲသို့ လီးဝင်သောအရသာကော စောက်ဖုတ် ကိုကလိနေသော အရသာကော ပြိုင်တူ ခံစားနေရကာ …အား…အင်း… အ…အင်း… သူ့လီးကြီးမှာ ကျမဖင်ထဲသို့ တစ်ထစ်ခြင်း တိုးဝင်နေရာ နောက်ဆုံးတွင် အဆုံးထိအောင်ဝင် သွားလေတော့သည်။ ထို့နောက်သူသည် လီးကြီးအား ပြန်ဆွဲမထုတ်သေးဘဲ အထဲတွင် ဆယ်ကြိမ်လောက်ကော့ကော့ထိုးကာညှောင့် လိုက်ရာ…အား… အမလေး…အ..အမေ…အမေ….အ…အ…အမလေး…သေတော့မှာဘဲ… သူ့ လီးကြီးမှာ ရင်ခေါင်းထဲထိအောင် ရောက်လာသလားဟုထင်ရသည်။.အူတွေအသည်းတွေ ဗြောင်းဆန်ကုန်အောင်..ခံစားနေရသည်။
ထို့နောက် သူ့လီးကြီးကို အဆုံးနီးပါပြန်ဆွဲထုတ်ကာ ဖြေးဖြေးချင်းပြန်ထိုးထဲ့လိုက်သည်…အား…အင်း…အင်း…သူ့လီးကြီး ပတ်ပတ်လည်က ဂေါ်လီများက ကျမဖင်ခေါင်းထဲရှိ ကြွက်သားနံရံများကို ပွတ်ဆွဲသွားရာ …အား..အ… အမလေး…နာ…နာ..တယ်…အ…ကျမမှာ ကုတင်ပေါ်ရှိ မွှေ့ယာခင်းကို လက်နဲ့ ဆုပ်ဆွဲထားရင်း အံကိုကြိတ်ကာ အောက်နုတ်ခမ်းကို သွားနဲ့ ဖိကိုက်ထားကာ နာကျဉ်သည့် ဝေဒနာကိုခံစားနေရသည်။ ဖြေးဖြေး ချင်း လိုးသွင်းနေရာ..အချက်၃၀ခန့် တွင် ဖင်ခေါင်းထဲသို့ လီးအဝင်ချောလာလေသည်။ ထိုအခါ သူသည် ကျမဖင်ကြီးကို ဘယ်ပြန်ညာပြန် တဖျန်းဖျနိး ရိုက်ကာ ခပ်ကြမ်းကြမ်းဆောင့်လိုးလေတော့သည်။ ဆယ်ချက်ခန့် ဆောင့်ပြီးသော် ဖင်ထဲမှ လီးကို အပြင်သို့ဆွဲထုတ်လိုက်ရာ ဖင်ခေါင်းထဲမှ လေများက တစ်ဘုဘုနဲ့ အန်ထွက်လာကြသည်။ ပြီးမှပြန်ထိုးထဲ့ကာလိုးပြန်သည်။
ထိုသို့ လိုးနေရင်း မာမူကြီးကစောက်ဖုတ်ကိုကလိနေကာ တွဲလောင်းကျကာ ဆောင့်လိုးနေသောအရှိန်ကြောင့် လှုပ်ရမ်းနေသော ကျမနို့ကြီးကို ဆုပ်ညစ်ကာ ချေနေရာ ကျမမှာ ပြီးသွားရပြန်သည်။ ထို့နောက်တွင်တော့ မဲကြီးသည် ကျမခါးသိမ်သိမ်လေးကို လက်နှစ်ဖက်ဖြင့်ဆုပိကိုင်ကာ တဖုန်းဖုန်းနေအောင်ဆောင့်လိုးရင်း သု့လီးကြီးထဲမှ လရည်များက ကျမဖင်ခေါင်းထဲသို့ ပူကနဲ ပူကနဲ ပန်းဝင်လာကြလေတော့သည်။
အား…အား..အမေ့..အိုး…အိုး….အမေ့ …သေပါပြီ …သေပြီ…အမလေး…လေး…အိုး…အိုး…. ကျမ မှာ အမေတကာ အော်ရင်း မွေ့ယာပေါ်သို့ မှောက်ခုံကြီးပစ်ကြသွားလေတော့သည်။ သူသည် လီးကြီးကို ဖင်ထဲမှ ဆွဲထုတ်လိုက်ရာ … ဗလွတ်….ဘွတ်..ဘွတ် ….ဘူ..ဖင်ထဲမှ လေများအန်ထွက်လာပြီး သူ့လရည်များပါဖင်အဝလေးမှ စီးကြလာသည်။ သူက ကျမဘေးတွင် ပက်လက်လှဲကာ….. [အား…..ကောင်းလိုက်တာ….မထွေးရာ…. ခင်ဗျားဖင်ကြီးကို ကြည့်ကြည့်ပြီး လီးတောင်နေတာကြာပြီ… ခုမှဘဲ အားရပါးရလိုးရတော့တယ်…..ကောင်းမှကောင်း…မာမူကြီး….ဆွဲလေ…..အရမ်းကောင်းတယ်….အားရပါးရသာဆွဲ…. ကျုပ် အမောဖြေလိုက်အုံးမယ်… ] ထို့နောက်မာမူကြီးက ကျမအား ကုတင် စောင်းသို့ဆွဲယူကာ ပေါင်နှစ်ခေါင်းကို သူ့ပုခုံးပေါ်ကိုမတင်ပြီး သူ့လီးကြီးကို ကျမဖင်အဝတွင်တေ့ပြီး ဆောင့်သွင်းလိုက်ရာ လီးကြီးမှာ ခုနက မဲကြီး ပြီးထားသော လရည်များကြောင့် လျှောကနဲ အဆုံးထိဝင်သွားရာ….
ဗလွတ် ဘွတ်…အ…အမလေး…သေပါပြီတော့….. ထို့နောက်တွင်တော့ တရကြမ်းဆောင့်လိုးကာ သူ့လရည်များ ကို ဖင်ခေါင်းထဲသို့ ပန်းထုတ်လိုက်ပြန်သည်။ ပြီးနောက်သူလည်း ကျမဘေးတွင်လာလှဲ ပြီး အိပ်ပျော်သွားလေတော့သည်။ ကျမလည်း အမောဖြေကာ သူ့တို့အခန်းထဲရှိ ရေချိုးခန်းတွင်ရေချိုးပြီး အဝတ်ပြန်ဝတ်ကာ ကျမတိုက်ကြီးဖက်သို့ ပြန်ကူးလာခဲသည်။ လမ်းပင်မလျှောက်နိုင်…နာနေသဖြင့် ထိမ်းပြီးလျှောက်လာခဲ့ပြီး အခန်းထဲသို့ရောင်သော် မွှေ့ယာကြီးပေါ်တွင် အိပ်ပျော်နေသောကျမယောက်ကျားကိုကြည့်ကာ …. အဲ့ဒါရှင်မကောင်းလို့ ….ရှင်မကောင်းလို့….အဟင့်….ဟင့်….. ငိုနေမိသည်။ နာရီကိုကြည့်လိုက်ရာ မနက် ၃နာရီရှိပြီ။ ကျမမောမောနဲ့ အိပ်ပျော်သွားတော့သည်။ crd
Categorized as အငျးဆကျ Tagged ကာမအမှောငျ